နှင်းဖုံးတောင်တန်းများ နဲ့ ရဲတိုက်မြို့ဟောင်း
ဂျော်ဂျီယာ နိုင်ငံဟာ တချိန်က ဆိုဗီယက်ယူနီယံလက်အောက်ခံ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး အင်မတန်ရှေးကျတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ တောင်ထိပ်တိုင်းမှာ ရဲတိုက်နီနီကြီးတွေကိုတွေ့နိုင်ပြီး ရှေးအကျဆုံး ရဲတိုက်ဟာ သက်တမ်းနှစ်ထောင့်ငါးရာကျော် သမိုင်းရှိတဲ့ မက်စ်ခိတာမြို့က ရဲတိုက်ကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံဟာ အာရှနဲ့ ဥရောပကို ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဘာသာစကားကတော့ ဂျော်ဂျီယာ ဘာသာစကားကိုသုံးပါတယ် ကိုယ်ပိုင်စာပေရှိတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ စိတ်ဝင်စားစရာ ရှေးဟောင်းသမိုင်းတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပါ။ နိုင်ငံရဲ့ လူဦးရေက ၄.၈ သန်းသာရှိပါတယ်။ လူဦးရေရဲ့ ကိုးဆယ် ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပြီး ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းကြပါတယ်။ တောင်ထိပ်ပေါ်မှာ ရှိရှိသမျှ ရဲတိုက်တိုင်းဟာ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွေသာဖြစ်ပြီး တနိုင်ငံလုံးမှာ လက်ညှိုးထိုးလို့ မလွဲအောင် တွေ့ရပါတယ်။
တကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအရ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း အရေအတွက်အားဖြင့် တတိယအများဆုံးနိုင်ငံလို့ ဆိုပါတယ်။ ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံသုံးငွေကြေးကို ဂျော်ဂျီယာ လာရီလို့ခေါ်ပြီး တစ်ဒေါ်လာကို ၂.၇ လာရီနဲ့ နေရာတိုင်းမှာ အလွယ်တကူ လဲလှယ်လို့ရပါတယ်။ ငွေလဲလှယ်တဲ့ လုပ်ငန်းကို အိမ်တွင်းအသေးစား လုပ်ငန်းအဖြစ် လုပ်ကိုင်ကြပြီး ငွေဈေးနှုန်းကွာဟမှု မရှိတဲ့အတွက် နေရာတိုင်းမှာ စိတ်ချလက်ချလဲလှယ်လို့ရပါတယ်။
နိုင်ငံရဲ့ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းက ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၉၀ ကျော်မှ နိုင်ငံသားများကို ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။ အလားတူပဲ နိုင်ငံပေါင်း ၅၀ မှာ နေထိုင်ခွင့် ဗီဇာ ရရှိထားပြီး အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူများကိုလည်း ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ပေးထားပါသေးတယ်။ ဘရာဇီး နိုင်ငံသားတွေနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကတော့ တစ်နှစ်တိတိ ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ရထားပါသေးတယ်။ ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်မရတဲ့ အခြားနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ အွန်လိုင်းဗီဇာအလွယ်တကူလျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုက ခွဲထွက်လာတဲ့ နိုင်ငံပီပီ ဆင်းရဲတဲ့ အထည်ကြီးပျက် နိုင်ငံလို့ ဆိုလို့ရပါတယ်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကလွဲလို့ အခြား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမရှိပါဘူး။ အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာ ဝိုင်ကို ကိုယ်တိုင်ချက်ပြီး ရောင်းကြပါတယ်။ အိမ်တွေမှာ ကိုယ်တိုင်ချက်တဲ့ ဝိုင်ကို ကျာကျာလို့ခေါ်ပါတယ်။ ကားသမားတိုင်းဟာ သူတို့ကားထဲမှာ မိသားစုကချက်ထားတဲ့ ဝိုင်ပုလင်းတွေ အလွယ်တကူထည့်ထားပြီး ဧည့်ဝတ်ပြုတတ်ကြပါတယ်။
မြို့တွင်းမှာတော့ ဟောင်းနွမ်းဆွေးမြေ့နေတဲ့ အဆောက်အဦးတွေ အိုကြီးအိုမနဲ့ အလုပ်လုပ်နေသူတွေနဲ့ တောင်းရမ်းစားသောက်နေသူတွေကို တွေ့ရပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်လို့ လူတိုင်းဟာ အလုပ်ကို ကြိုးစားပမ်းစားလုပ်ကြပါတယ်။ အဘိုးအို အဘွားအိုတော်တော်များများ ခါးကိုင်းကိုင်းနဲ့ အလုပ်လုပ်နေကြတာကို ဘဝမှာ ပထမဆုံးအကြိမ်မြင်ဘူးတာပါပဲ။
ဒီနိုင်ငံလေးမှာ လေဆိပ်ကအစပြုလို့ တမြို့လုံးလိုလို တောင်းရမ်းစားသောက်နေသူတွေ အတော်များများရှိတယ်ဆိုပေမယ့် သူခိုး ခါးပိုက်နှိုက်မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ နိုင်ငံထဲမှာ စစ်သားအရေအတွက်များများစားစား မရှိပါဘူး ဒါပေမယ့် လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေကိုတော့ နေရာမလပ်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ မြိ့ထဲလမ်းတွေပေါ် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေအသွားများတဲ့နေရာတွေ ဈေးတွေ ပန်းခြံတွေ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်တွေ အပန်းဖြေစခန်းတွေမှာ ရဲဝန်ထမ်းတွေနဲ့ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေကို လက်ညှိုးထိုးမလွဲအောင်တွေ့ရပါတယ်။
ကျွန်မတို့ရောက်သွားတဲ့ ဆောင်းရာသီမှာ နေထွက်ချိန်က မနက် ရှစ်နာရီခွဲဖြစ်ပြီး နေဝင်ချိန်ဟာ ညနေ ငါးနာရီ လေးဆယ်ဖြစ်လို့ အလုပ်ချိန်တွေကို မနက် ဆယ်နာရီကနေ ညဆယ်နာရီအထိ သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ မြို့ထဲက လမ်းတွေပေါ်လျှောက်သွားမယ်ဆိုရင် ချစ်စရာကောင်မလေးတွေက အတင်းလိုက်ဆွဲပြီး Tour package တွေရောင်းကြပါလိမ့်မယ်။ ခရီးသွားအစီအစဉ်တွေဟာ ဈေးနှုန်းသင့်တော်သလို မြို့တွင်းက တက္ကစီတွေအားလုံးဟာလည်း ဈေးနှုန်းသင့်ပါတယ်။တက္ကစီသမားတွေကို လေ့လာမိသလောက် လူငယ်ကားသမားတွေဟာ သက်ကြီးပိုင်းကားသမားတွေလောက် ရိုးသားမှုမရှိဘူးလို့ ထင်မြင်ယူဆရပါတယ်။
လေဆိပ်ကနေ ငှားစီးလာတဲ့ တက္ကစီသမားဟာ လူငယ် လူနပ်ဖြစ်ပြီး ကျွန်မတို့ဆီက မတန်တဆ ကားခယူသွားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ခရီးစဉ်တွေအတွက် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီက ငှားထားတဲ့ လူငယ်ကားသမားဟာလည်း သူ့ကိုယ်ပိုင်ကားကို ကိုယ်တိုင်မောင်းပေမယ့် စီးပွားရေးဆန်ပါတယ်။ သူ့ကိုတော့ အာပေါက်အောင် ဈေးဆစ်ရပါတယ်။ မြို့ထဲက အသက်ကြီးပိုင်း အဘိုးအိုအရွယ် တက္ကစီသမားတွေကတော့ ဈေးဆစ်စရာမလိုအောင်ကို ရိုးသားကြပြီး လေးလာရီ ငါးလာရီလောက်သာ တန်ရာတန်ကြေးတောင်းတတ်လို့ အားနာပြီး ကားခကို ပိုပေးဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့ ဒူဘိုင်းကနေ ည ၈ နာရီထွက်သွားတော့ ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံရဲ့ မြို့တော် တီဘလီစီကို ည ၁၂ နာရီလောက်မှာ ရောက်ပါတယ်။ လေယာဉ်ထဲက ထွက်ထွက်ချင်း tube ထဲကိုဝင်တာနဲ့ အနူတ် ၂ ဒီဂရီရှိတဲ့ ရာသီဥတုက အေးစက်စက်ဆီးကြိုနေပါတယ်။ လဝက ကောင်တာရောက်တော့ ပါတ်စပို့စာအုပ်မှာ ကျွန်မတို့ ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ ယူအေအီးနိုင်ငံရဲ့ ဗီဇာကို ကြည့်ပြီး ဘယ်နှစ်ရက်နေမှာလဲ ဒီကပြန်ရင်ဘယ်ကို ဆက်သွားမှာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းနှစ်ခုမေးပြီး ဗီဇာတုံးထုပေးပါတယ်။ ဗီဇာတုံးထုပြီးတာနဲ့ ရာသီဥတုအေးတယ်ဆိုပြီး ဝိုင်တစ်ပုလင်းစီပေးပါတယ်။
Tour Package မဝယ်ထားပဲ ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ ကိုယ်လာတဲ့အတွက် လေဆိပ်မှာ တက္ကစီစငှားရပါတယ်။ လေဆိပ်အပြင်မှာ အတော်အေးနေတဲ့ အတွက် အပြင်ထွက်ပြီး တက္ကစီမငှားခင် လက်အိတ်တွေနဲ့ ဦးထုတ်တွေ ဝတ်နေတုန်း တက္ကစီသမားတစ်ယောက် အနားကိုရောက်လာပါတယ်။ သွားမယ့်နေရာကိုမေးလာတော့ သူ့ကားက မီတာတက္ကစီဟုတ်မဟုတ်
ပြန်မေးရပါတယ်။ မီတာတက္ကစီပါ စိတ်ချပါဆိုလို့ သူ့ကားနဲ့ ဟိုတယ်ကို သွားကြပါတယ်။
လမ်းမှာ ပိုက်ဆံလဲဖို့ အိတ်ချိန်းတခုမှာ ကားရပ်ပေးလို့
ဒေါ်လာတွေ လဲလိုက်ပါတယ်။ သူတို့နိုင်ငံထဲမှာ ဂျော်ဂျီယာ လာရီကလွဲလို့ နိုင်ငံခြားငွေသုံးလို့ မရပါဘူး။ လေဆိပ်ကနေ ဟိုတယ်ကို နာရီဝက်ကျော်ကျော်လောက်ကားစီးရပါတယ်။ ည သန်းခေါင်မှ မြို့ထဲကိုရောက်တယ်ဆိုပေမယ့် မြို့ထဲမှာ လူသွားလူလာမပြတ်ပါဘူး။
ကျွန်မတို့ ကံကောင်းသွားတာက ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံမှာ ခရစ်စမတ်ပွဲတော်ကို ဇန်နဝါရီလ (၇) ရက်နေ့မှာ ဆင်နွဲကြတာမို့ ကျွန်မတို့ရောက်တဲ့ အချိန်ဟာ ခရစ်စမတ်ကို ကြိုဆိုတဲ့ အချိန်ဖြစ်နေတာပါပဲ။ တကမ္ဘာလုံးမှာ ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့ကို ခရစ်စမတ်နေ့လို့ သတ်မှတ်ထားပေမယ့် ခရစ်ယာန် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံကတော့ ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်နေ့နဲ့ ၇ ရက်နေ့တွေမှာ ခရစ်စမတ်ပွဲကို ကျင်းပကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မြို့ထဲက လမ်းမတွေမှာ ခရစ်စမတ်ပွဲကိုကြိုဆိုတဲ့ အပြင်အဆင်တွေကို နေရာအနှံ့မှာ တွေ့ရပါတယ်။
ကျွန်မတို့ ရွေးထားတဲ့ ဟိုတယ်က ကြယ်သုံးပွင့်အဆင့်ရှိတဲ့ ဟိုတယ်ပါ။ မြို့လည်က အော်ပရာဟောက်စ်နဲ့ ဘေးချင်းကပ်ရက်ကဆိုတော့ သွားရေးလာရေးအတွက် အဆင်ပြေလှပါတယ်။ ကားသမားက မီတာ တက္ကစီလို့ဆိုပေမယ့် သူ့မီတာက ကားမှာမတပ်ထားပဲ ဖုန်းက မီတာနဲ့ မှတ်ပါတယ်။ ကျသင့်ငွေကိုသူက ဒေါ်လာနဲ့တွက်ပြီး သူတို့ငွေ လာရီ ၁၇၀ တောင်းပါတယ်။ ကျွန်မတို့က တခါမှမရောက်ဘူးတော့ သူတောင်းသလောက်ပေးမိပါတယ်။ လေဆိပ်ကို အပြန်ခရီးမှာ တကယ်တမ်းကျသင့်ငွေက လာရီ ၄၀ ပဲ ရှိပါတယ်။ ဒီတခါတော့ ညကြီးသန်းခေါင် လေဆိပ်အပြင်ထွက်ပြီး တရားဝင်တက္ကစီကို ရှာဖို့ ပျင်းမိတဲ့အတွက် ကားသမားလူလည်နဲ့ စတွေ့တွေ့ချင်း ခံလိုက်ရတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
ဟိုတယ်အခန်းခကတော့ နှစ်ယောက်ခန်းတစ်ခန်းကို တရက်စာအတွက် ၁၇၀ လာရီ ( ၆၂ ဒေါ်လာလောက်) ကျပါတယ်။ ဒီထက့်ဈေးသက်သာတဲ့ Hotel တွေ Hostel တွေလည်းရှိပါတယ်။ မနက်စာကိုတော့ ဟိုတယ်က ကျွေးတဲ့ ချိစ်တွေ ပေါင်မုန့်တွေများတဲ့ ဒေသစာတွေကိုပဲ စားရပါတယ်။ ပထမဆုံးနေ့ မနက်စာစားပြီးတော့ ဘာအစီအစဉ်မှ မဆွဲရသေးတဲ့အတွက် ညက ကားသမားပြထားတဲ့ မြို့ဟောင်းနဲ့ ရဲတိုက်ကြီးတွေဆီကို ခြေဦးလှည့်ပါတယ်။ ဟိုတယ်ကနေ မြို့ဟောင်းရှိရာအရပ်ကို မှန်းပြီး လမ်းလျှောက်ကြတာပါ။ တောင်ကုန်း တောင်စောင်းတွေကြားမှာ တည်ထားတဲ့ မြို့မို့ ကုန်းတက် ကုန်းဆင်းတွေ များပါတယ်။
ခြေဦးတည့်ရာ မှန်းလျှောက်ရင်း တနေရာမှာ ကားသမားတစ်ယောက်က လာမိတ်ဆက်ပြီး သူ့ကားကို ငှားမယ်ဆိုရင် တစ်နာရီကို လာရီ ၂၀ ပဲ ပေးရမယ်ဆိုတာနဲ့ သူ့ကို ဘယ်နေရာတွေသွားရမလဲမေးရင်း သူညွှန်းဆိုတဲ့ ရှေးဟောင်းမြို့ကို သုံးနာရီစာ လာရီ ငါးဆယ်နဲ့ ဈေးဆစ်ပြီး ငှားဖြစ်လိုက်ပါတယ်။ ကားငှားခသက်သာတယ်ဆိုပေမယ့် သူ့ကားက အတော် မော်ဒယ်နိမ့်နေတဲ့ ပြတိုက်ပို့လို့ရကာနီး ဆလွန်းကားလေးပါ။
တဘလီစီမြို့ထဲကနေ ကီလိုမီတာ ၂၀ သာသာလောက်ဝေးတာမို့ နာရီဝက်ကျော်ကျော်လောက်
မောင်းတော့ မက်စ်ခိတာ မြို့ဟောင်းကိုရောက်ပါတယ်။ ပထမဆုံးတောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်က ရဲတိုက်ကြီးဆီကို ရောက်ပါတယ်။ ရဲတိုက်ကြီးနားကို မရောက်ခင်မှာ တောင်ကုန်းထိပ်ကနေ မြစ်နှစ်စင်းကို စတွေ့ပါတယ်။ မြစ်နှစ်ခုဆုံရာ နေရာဟာ တောင်ထိပ်ကနေ စီးမိုးကြည့်တော့ သိပ်လှပါတယ်။ ထူးခြားတာက မြစ်တစ်စင်းက အပြာရောင်ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်စင်းက အစိမ်းရောင်ပါ။ မြစ်နှစ်စင်းဆုံထိပေမယ့် ရေအရောင်တွေဟာ ရောမသွားပဲ သီးသန့်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီဒေသရဲ့ အလှအပ လို့ ဆိုလို့ရတဲ့ မြစ်နှစ်စင်းကတော့ Mtkvari နဲ့ Aragvi မြစ်တွေပါပဲ။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင့်ငါးရာခန့်က ရဲတိုက်ကြီးရှိပါတယ်။ ရဲတိုက်ကြီးကိုတော့ Jvari church လို့ခေါ်ပြီး ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေ ဝတ်ပြုသူတွေနဲ့ အမြဲလိုလိုစည်ကားနေတတ်ပါတယ်။
မက်စ်ခိတ မြို့ဟောင်းဟာ သမိုင်းဝင် မြို့ဟောင်းဖြစ်ပြီး ယူနက်စ်စကိုရဲ့ ထိန်းသိမ်းမှုအောက်မှာ ရှိပါတယ်။ BC ၃ ရာစုကနေ AD ငါးရာစုအထိ ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံရဲ့ မြို့တော် အဖြစ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီမြို့ဟောင်းလေးဟာ ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံနဲ့ Orthodox Christian တွေရဲ့ သမိုင်းကို လေ့လာဖို့ ခရီးသွားတွေ စိတ်ဝင်စားကြတဲ့ နေရာတစ်ခုလို့ ဆိုကြပါတယ်။ တောင်ပေါ်ကနေ ပြန်ဆင်းပြီးသိပ်မကြာခင်မှာ အင်မတန် အေးချမ်းဆိပ်ငြိမ်လှတဲ့ မြို့ဟောင်းကို
ရောက်ပါတယ်။ မြို့တမြို့လုံးမှာ လူနေအဆောက်အဦးအချို့ရှိပေမယ့် လူနေတဲ့ အရိပ်အယောင်မတွေ့ရလောက်အောင် ခြောက်ကပ် တိတ်ဆိတ်နေပါတယ်။ မြို့လေးထဲကို ဝင်လိုက်တော့ လမ်းကျဉ်းလေးထဲမှာ ဈေးတန်းလေးခင်းထားတာတွေ့ရပါတယ်။
ခြုံထည် ခေါင်းစွပ်တွေ ဒေသစာ မုန့်အချိုတွေ ဝိုင်ပူပူနဲ့ ကောက်ဖီဆိုင်လေးတွေ အမှတ်တရပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်လေးတွေနဲ့ သစ်သီးဆိုင်လေးတွေကို ခပ်ရိုးရိုး ခင်းကျင်းထားပါတယ်။ ဆိုင်တွေရဲ့ အခင်းအကျဉ်းနဲ့ ဈေးရောင်းနေသူတွေရဲ့ ပုံစံက အဖြူအမည်း ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ တွေ့နေကျ ရှေးဆန်တဲ့ အခင်းအကျဉ်းတွေပါပဲ။ ဈေးရောင်းသူအများစုဟာ အမျိုးသားများဖြစ်ပါတယ်။
ဂျော်ဂျီယာ နိုင်ငံသားတော်တော်များများ အင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်ကြပါတယ်။ စကားပြောတဲ့နေရာမှာလည်း ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိပြီး သူတို့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားပြောနေသလိုကို ပြောကြတာပါ။
ခက်တာက တခါတလေမှာ အမေးတခြား အဖြေတခြား ဖြစ်နေတာလေးတစ်ခုပါပဲ။
ဈေးတန်းလေးဆုံးသွားချိန်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း တစ်ထောင့်ငါးရာကျော်က တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ရဲတိုက်ကြီးကို ရောက်ပါတယ်။ ရဲတိုက်ကြီးရဲ့အတွင်းပိုင်း မျက်နှာကျက်နံရံတခုလုံးက ကျောက်ဂူကျောက်သားကို သခင်ယေရှုပုံထုထားပါတယ်။ Samtavro လို့ခေါ်တဲ့ ဒီ Orthodox church ကို လေးရာစုမှာ Mirian ဘုရင် (၃) က
တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ၁၁ ရာစုမှာ ဂျော့ဘုရင် (၁) က ပြန်လည်ပြုပြင်တည်ဆောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒီဘုရားရှိခိုးကျောင်းကတော့ စည်းကမ်းတင်းကျပ်ပါတယ် အမျိုးသမီးတွေအားလုံး ဘုရားကျောင်းထဲဝင်ရင် ဗလာထမီလို အနက်ရောင် ပိတ်ကို ခါးမှာ ပါတ်ချည်ပြီးမှ ဝင်ရပါတယ်။ အမျိုးသားများကတော့ ဦးထုပ်တွေ ချွတ်ပြီးမှ ဝင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ဘုရားကျောင်းထဲမှာလည်း ဆရာတော်တပါးက လှည့်ပါတ်ကြည့်ရှုနေပြီး စည်းကမ်းမလိုက်နာသူတွေကို လိုက်သတိပေးနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီမြို့ဟောင်းဟာ ဈေးတန်းလေးနဲ့ ဘုရားကျောင်းကလွဲလို့ အခြားနေရာတွေမှာ လူရယ်လို့ မရှိသလောက် နည်းပါးလှပါတယ်။ တိတ်ဆိတ်ခြောက်သွေ့ပြီး လူနေမရှိသလောက်နည်းတဲ့ မြို့ရဲ့ အခင်းအကျင်းမျိုးကို ရှေးဟောင်းရောမ ရုပ်ရှင်ကားတွေထဲမှာပဲ တွေ့ခဲ့ဘူးပါတယ်။
Mtskheta မြို့ကပြန်တော့ တီဘလီစီမြို့က တီဘလီစီမောလ်ကိုဝင်ပြီး ဈေးဝယ်ဖြစ်ပါတယ်။ မြို့ရဲ့ အကြီးဆုံးမောလ်ဖြစ်သလို ခရစ်စမတ်ပွဲတော်နဲ့လည်း တိုက်ဆိုင်နေတော့ မောလ်မှာ စည်ကားနေတာတွေ့ရပါတယ်။ ဥရောပတိုက်က နာမည်ကြီးတံဆိပ်တော်တေ်ာများများကိုတွေ့ရပြီး ဒူဘိုင်းနဲ့ယှဉ်ရင် ဈေးအတော်သက်သာတာကို တွေ့ရလို့ အားရပါးရ ဈေးဝယ်ဖြစ်ပြန်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ သတိတရပြောရမယ်ဆိုရင် ဂျော်ဂျီယာမှာ ဈေးဝယ်ထားတဲ့ ပြေစာတွေကို စုထားပြီး လေဆိပ်က ပြန်ထွက်ချိန်မှာ ပေးထားတဲ့ အခွန်ကို ပြန်ပြီး တောင်းခံလို့ရပါတယ်။ ကျွန်မတို့က ဒါကို မသိလေတော့ ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံး check
in လုပ်ပြီး ပြေစာတွေအားလုံး အိတ်နဲ့ပါသွားပြီးမှ သိရလို့ လေဆိပ်မှာ ဈေးဝယ်ထားတဲ့ ပြေစာတွေအတွက် ပြန်မတောင်းခဲ့ရပါဘူး။
ဈေးဝယ်ပြီးတော့ နေ့လည်စာစားဖို့ အတော်အချိန်လင့်နေတာမို့ တခုခုစားဖို့ ရှာရပါတယ်။ မောလ်ထဲမှာ စားသောက်ဆိုင် နှစ်ဆိုင်သာရှိပြီး လူပြည့်နေလို့ အကြာကြီး မတ်တပ်ရပ်ပြီးစားပွဲခုံရဖို့ စောင့်ရပြန်ပါတယ်။ ဒေသစာဖြစ်တဲ့ ကာချာပူရီလို့ခေါ်တဲ့ ပေါင်မုန့်အလယ်မှာ ချိစ်နဲ့ ကြက်ဥဖောက်ထည့်ပြီး ဖုတ်ထားတဲ့ ဒေသစာကိုစားကြပါတယ်။ ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံမှာ ကာချာပူရီလို့ခေါ်တဲ့ ပေါင်မုန့်ဟာ နေ့လည်စာ ညစာအကုန်လုံးအတွက် တမျိုးတည်းသော စားဖွယ်လို့ဆိုလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိန္ဒိယစားသောက်ဆိုင်တွေ ရှိတဲ့အတွက် အစားအသောက်ကြေးများသူ ထမင်းမှ ထမင်းစားချင်သူတွေအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။ အစားအသောက်တွေဟာ ဈေးနူန်းသင့်လှပါတယ်။
ဈေးဝယ်ပြီးတော့ ရှော့ပင်းမောလ်ကနေပြန်ထွက်ကြပါတယ်။ မနက်က သွားချင်ခဲ့တဲ့ မြို့ဟောင်းနဲ့ ရဲတိုက်ကြီးတွေဆီကို တက္ကစီနဲ့ ခရီးဆက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကားငှားခဈေးနှုန်းတွေက သင့်တင့်တာမို့ ဈေးဆစ်ရတာတွေ ဘာတွေ မရှိတော့ပဲ အဆင်ပြေနေခဲ့ပါတယ်။ မြို့ဟောင်းကို လည်မယ်ဆိုပေမယ့် ဝယ်လာတဲ့ အထုတ်အပိုးတွေက တပုံတပင်မို့ အထုတ်အပိုးတွေ အများကြီးဆွဲပြီး ကေဘယ်စီးဖို့ ချီတက်ခဲ့ရပါတယ်။ တောင်ထိပ်ကိုတက်ဖို့ ကေဘယ်စီးရတဲ့နေရာမှာ ပန်းခြံသေးသေးလေးနဲ့ သပ်သပ်ယပ်ယပ်
ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ မြို့ကြီးက ဟောင်းနွမ်းနေတယ်ဆိုပေမယ့် သန့်ရှင်းရေးသမားတွေဟာ မျက်ခြေမပြတ် အမှိုက်တွေ သိမ်းနေတတ်တာမို့ မြို့ဟောင်းကြီးဟာ သန့်ရှင်းနေပါတယ်။
တောင်အောက်မှာ အားရပါးရ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးမှ ကေဘယ်စီးပြီး တောင်ပေါ်တက်ခဲ့ကြတယ်။ ကေဘယ်ကားကတော့ တောင်ပေါ်နဲ့ တောင်အောက် အသွားအပြန်ှ တစ်ယောက်ကို ငါးလာရီပဲ ပေးရပါတယ်။ ရဲတိုက်ကြီးတွေနဲ့ ဂျော်ဂျီယာရဲ့ မိခင်ရုပ်တုကြီးရှိတဲ့ ဆိုလိုလာကီ တောင်ကုန်းပေါ်ကနေ တမြို့လုံးကို အပေါ်စီးက မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းဟာ သိပ်လှပါတယ်။ ညနေ နေမဝင်ခင်နဲ့ နေဝင်ပြီး စပ်ကြားကာလလေးမှာ အလင်းအမှောင် ကောင်းလွန်းတဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေ ရခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ဂျော်ဂျီယာရဲ့ မိခင် ရုပ်တုကြီးကို တီဘလီစီမြို့ရဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၅၀၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဆိုလိုလာကီ တောင်ကုန်းပေါ်မှာ ၁၉၅၈ ခုနှစ်မှာ စိုက်ထူခဲ့ပါတယ်။ ဂျော်ဂျီယာရဲ့ မိခင်ရုပ်တုကြီးရဲ့ ဘယ်ဘက်လက်မှာတော့ ဧည့်သည်တွေကို ဧည့်ဝတ်ပြုဖို့ ဝိုင်ခွက်ကို ကိုင်ထားပြီး ညာဘက်လက်မှာတော့ ရန်သူတွေကို နှိမ်နင်းဖို့ ဓါးတစ်လက်ကို ကိုင်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒီတောင်စောင်းပေါ်ကနေ ရဲတိုက်ကြီးတွေဆီကို ဆင်းသွားလို့ရသလို ရုက္ခဗေဒ ဥယျာဉ်ကိုလည်း သွားလို့ရပါသေးတယ်။ ကေဘယ်လ်နဲ့မသွားပဲ ကားလမ်းကနေ တက်လို့လည်းရပါတယ်။ ညနေစောင်းမှာ ခရီးသွားဧည့်သည်တွေနဲ့ အမြဲတမ်းစည်ကားနေတတ်ပြီး တောင်ပေါ်ကိုတက်တဲ့ ကေဘယ်ကားတွေဟာ မနက် ၁၁ နာရီကနေ ည
၁၁ နာရီအထိ ဖွင့်ထားပါတယ်။
တောင်ပေါ်ကပြန်ဆင်းလာတော့ မြို့ဟောင်းထဲမှာ ညစာစားဖို့ အာရှစာရနိုင်တဲ့ စားသောက်ဆိုင်ကို ရှာရပြန်ပါတယ်။ မြို့ဟောင်းနဲ့ ဟိုတယ် နီးနီးလေးဆိုတာကို မသိလေတော့ ညစာစားပြီးတော့ ဟိုတယ်ကို တက္ကစီနဲ့ပြန်မိပါတယ်။ ဟိုတယ်ကိုပြန်ရောက်တော့ ည ၁၀ နာရီကျော်နေပြီ။ ဒါနဲ့ နောက်နေ့လည်မယ့် ခရီးစဉ်အတွက် ဟိုတယ်မှာ စုံစမ်းမေးမြန်းပြီး ကားငှားရပါတယ်။ နောက်နေ့မနက် မနက်စာစားပြီးတာနဲ့ တခြားတမြို့မှာ ရှိတဲ့ ski resort ကိုသွားဖို့ ဟိုတယ်ရှာ ခရီးစဉ်ရှာနဲ့ လည်ဖို့ပါတ်ဖို့ ပြင်ဆင်ရပြန်ပါတယ်။
ဒုတိယနေ့မှာတော့ နေထွက်ချိန်က မနက် ၈ နာရီခွဲဆိုပေမယ့် အကျင့်ပါနေတဲ့ မျက်လုံးတွေက မနက် ခြောက်နာရီလောက်တည်းက နိုးနေခဲ့ပါတယ်။ တီဘလီစီမှာ လေးညတိတိ အိပ်ခဲ့ရာမှာ တစ်ညက အပူပေးစက်အလုပ်မလုပ်လို့ တောင့်တင်းအောင်အေးတဲ့ကြားက ဂွမ်းစောင် ၂ ထပ်နဲ့ မနည်းအိပ်ရပါတယ်။ နောက်ညတွေကျတော့ အပူပေးစက်က အပူလွန်ပြီး လူတွေလည်း
ဘာဘီကျူးမဖြစ်ရုံတမည်မို့ Heater ကို ဟိုကလိသည်ကလိနဲ့ အပူချိန်တင်လိုက်ချလိုက်နဲ့ အော်ဟစ်နေရပြန်ပါတယ်။ ဒါကလည်း အတွေ့အကြုံသစ်တစ်မျိုးပါပဲ။
Gudauri ဆောင်းတွင်းကာလမှာ Gudauri ski resort ဟာ ဂျော်ဂျီယာမှာ နာမည်ကြီးပါတယ်။ ဒီရေခဲတောင် အပန်းဖြေစခန်းကို ဒီဇင်ဘာလကနေ ဧပြီလလောက်အထိ ဖွင့်ထားပါတယ်။ ဒေသခံတွေရော ခရီးသွားဧည့်သည်တွေပါ ကျိတ်ကျိတ်တိုးအောင် စည်တဲ့ ski resort မို့ ခရီးသွားကုမ္ပဏီတစ်ခုကနေ ကားငှားပြီး ဂူဒါဝီကို မနက် ၁၁ နာရီလောက်မှာ စထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ မြို့တော် တီဘလီစီကနေ ဂူဒါဝီကို ၈၈ ကီလိုမီတာဝေးပြီး တောင်တက်လမ်းကို နှစ်နာရီလောက်မောင်းရပါတယ်။ ကားလမ်းတွေဟာ နှင်းခဲတွေအရည်ပျော်နေတော့ မိုးတွင်းလမ်းတွေလို အဆင်မပြေလှပါဘူး။
လမ်းတလျှောက်မှာ လမ်းဘေးဝဲယာက မြို့တွေ ရွာတွေအားလုံး နှင်းခဲတွေနဲ့ ဖုံးနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ် နှင်းခဲလွင်ပြင် နှင်းခဲချိုင့်ဝှမ်း နှင်းခဲတွေပိတ်နေတဲ့ ရေခဲမြစ်တွေ နှင်းလွှာတွေပိနေတဲ့ အိမ်တွေ တံတားတွေကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရပါတယ်။ ပထမအစီအစဉ်အရ ဂူဒါဝီ ရေခဲတောင် အပန်းဖြေစခန်းရှိတဲ့မြို့လေးမှာ တညအိပ်ဖို့ဆိုပြီး ဟိုတယ်ကနေ check out လုပ်လာခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ခရစ်စမတ်ပွဲတော် ပိတ်ရက်မို့ ဟိုတယ်တွေအားလုံး အခန်းတွေပြည့်နေတာရယ် ဈေးတွေ အဆမတန်များနေတာရယ်ကြောင့် တီဘလီစီကို ပြန်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ရပြန်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ညအိပ်မယ်ဆိုရင်လည်း ရေခဲနေတဲ့ တောင်ပေါ်မြို့ဖြစ်လို့ ညဘက်မှာ လည်စရာသွားစရာနေရာမရှိသလို မြို့တော်မှာလို တက္ကစီကားငှားဖို့လည်း မလွယ်ပါဘူး။
ကားက အသွားတစ်ကြောင်းတည်းကို ၁၈၀
လာရီနဲ့ လိုက်လာပေမယ့် အပြန်အတွက်ပါဆိုတော့ ၂၈၀ နဲ့ သဘောတူပါတယ်။ လာရီ၂၈၀ဆိုတော့ ဒေါ်လာ တစ်ရာစွန်းစွန်းကျတယ်လို့ ဆိုလို့ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ လိုအပ်တဲ့ အသုံးအဆောင်တချို့ကိုယူပြီး ရေခဲတောင်ပေါ်တက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပင်လယ်မျက်နှာပြင်အထက် မီတာ ၂၇၅၀ မြင့်တဲ့ရေခဲတောင်ပေါ်ကို မှန်အလုံပိတ် ကေဘယ်ကားလေးတွေနဲ့ တဆင့်ပြီးတဆင့်တက်ရပါတယ်။ စကိတ်စီးမယ့်သူတွေက စကိတ်တွေ လက်ကိုင်တုတ်တွေပါတော့ အလုံပိတ်ကေဘယ်ကားစီးလို့မရပါဘူး။
စကိတ်စီးသူတွေအတွက် ခြားရဟတ်တွေလို ဟင်းလင်းဖွင့် ကေဘယ်ကားတွေရှိပါတယ်။ ဒါကို သတိမထားမိပဲ လက်မှတ်ဝယ်ပြီးတာနဲ့ စကိတ်သမားတွေ တန်းစီနေတဲ့ နောက်ကနေ
တိုးပြီးလိုက်သွားတော့ မီတာ ၂၇၀၀ ကျော်ကို အဆင့်ဆင့်တက်ရတဲ့ ဟင်းလင်းပွင့်
ကေဘယ်ပေါ်မှာ အသည်းတထိတ်ထိတ်နဲ့ ပါသွားခဲ့ပါတယ်။
တောင်ပေါ်အတက်မှာ ရေခဲငွေ့ပါတဲ့ လေပြင်းတွေတိုက်ပြီး ကေဘယ်ကားလေးက ယိမ်းထိုးနေခဲ့ပါတယ်။ ရေခဲပြင် ရေခဲတောင်တွေကို ငုံမကြည့်ရဲခဲ့သလို ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့လည်း ဖုန်းတွေ မထုတ်ရဲပါဘူး။ ကိုယ်ပေါ်ပါလာတဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေ ပြုတ်မကျဖို့သာ ဂရုစိုက်နေရပါတယ်။ ခြေတွေလက်တွေ ထုံကျင်တဲ့အထိ အေးနေတော့ လက်ချောင်းလေးတွေကို ခဏခဏ ကွေးချည်ဆန့်ချည်လုပ်ပေးရပါတယ်။ အတူပါလာတဲ့ အမတော်ကတော့ Selfie stick ထုတ်ပြီး ရသလောက် အနေအထားနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ ကြိုးစားရှာပါတယ်။
တောင်ပေါ်မှာတော့ စကိတ်စီးသူတွေ အတော်များပါတယ်။ စကိတ်စီးသင်နေဆဲသူတွေအတွက်လည်း သီးသန့်လမ်းကြောင်းနဲ့ သင်ပေးနေတာတွေ့ရပါတယ်။ တောင်ပေါ်မှာ ကေဘယ်လ်စခန်းသုံးခုရှိပြီး သုံးနေရာလုံးမှာ စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်စီရှိပါတယ်။ ဆိုင်အတွင်းပိုင်းမှာတော့ အပူပေးစက်ရှိတဲ့အတွက် သက်တောင့်သက်သာရှိပါတယ်။ စားသောက်ဆိုင်နဲ့ ကပ်လျက်မှာ သန့်စင်ခန်းရှိပါတယ်။ ဘိုထိုင်လည်းမဟုတ် ရေလည်းမရှိတဲ့အတွက် သိပ်အဆင်မပြေလှပါဘူး။ ရေခဲတွေက သန့်စင်ခန်းထဲက ကြမ်းပြင်တွေမှာပါ နေရာမလပ် နေရာယူထားတော့ သန့်စင်ခန်းထဲမှာပါ စကိတ်စီးနေရသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ သန့်စင်ခန်းဝင်ဖို့ တန်းစီနေတုန်းမှာ ခေါင်မိုးပေါ်က တစ်ပေလောက်ထူတဲ့ နှင်းခဲကြီးဝုန်းကနဲ ပြိုကျလာလို့ ဘေးလွတ်ရာကို ထွက်ပြေးရပါသေးတယ်။
စားသောက်ဆိုင်ထဲမှာတော့ ခရစ်စမတ်ပိတ်ရက်မို့ ကျိတ်ကျိတ်တိုးအောင်စည်နေပြီး ထိုင်စရာ နေရာတနေရာရဖို့
အတော်ကြီး စောင့်လိုက်ရပါတယ်။ နေ့လည်စာစားဖို့ ဒေသစာ အာချာပူရီမှာတော့ တစ်နာရီစောင့်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကော်ဖီ ဝိုင်ပူပူနဲ့ ဒေသထွက်သစ်သီးဝိုင်တွေမှာတော့ သိပ်စောင့်စရာမလိုပါဘူး။ ဒေသထွက် သစ်သီးမျိုးစုံကို ပုလင်းကြီးတွေနဲ့ အစီအရီထည့်ပြီး ဝိုင်ဖောက်ထားတာတွေ့တော့ မြန်မာပြည်က အိမ်တွေမှာ သရက်ချဉ်တို့ ကတက်ချဉ်တို့
အိုးတွေနဲ့ ထည့်တည်တာကို ပြန်မြင်ယောင်မိပါတယ်။
တောင်ပေါ်အပန်းဖြေစခန်းမှာ ကလေးတွေကို စွပ်ဖားလှည်းလို ရေခဲပြင်သုံး လှည်းလေးတွေနဲ့ ထည့်ပြီး ဆွဲသွားကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ တောင်အောက်ကနေ ကေဘယ်လ်နဲ့တက်လာပြီး တောင်စောင်းတွေတလျောက် စကိတ်နဲ့ ဆင်းသွားသူတွေ အနီးအနားက တောင်စောင်းလေးတွေမှာပဲ လှည့်ပြီး စကိတ်စီးနေသူတွေနဲ့ တောင်ပေါ်စခန်းလေးက စည်ကားနေခဲ့ပါတယ်။ ကေဘယ်လ်လက်မှတ်ကလည်း အသွားအပြန်ကိုမှ ၁၀ လာရီပဲ ကျတာမို့ ဆင်းချည်တက်ချည် စကိတ်စီးသူတွေအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။ စကိတ်မစီးပဲ အလည်သက်သက်ရောက်သွားသူတွေကတော့ တောင်ပေါ်မှာ နေရာစုံအောင် လျှောက်သွားပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့ အလုပ်ပဲ ရှိပါတယ်။
ကော်ဖီသောက် နေရာအနှံ့ ဓါတ်ပုံရိုက် ရေခဲပြင်ပေါ်မှာ စိတ်တိုင်းကျ ကစားလို့ဝမှ အလုံပိတ်ကေဘယ်လ်ကားနဲ့ တောင်အောက်က စခန်းကို ပြန်ဆင်းကြပါတယ်။ မှန်အလုံပိတ်ကေဘယ်ကားနဲ့ ပြန်ဆင်းတော့ အဆင်းလမ်းတလျှောက်လုံးစိတ်တိုင်းကျ ဓါတ်ပုံရိုက်ခွင့်ရပါတယ်။ လေကာမိုးကာ လုံလုံခြုံခြုံမို့ ရေခဲတောင်တွေရဲ့ အလှအပနဲ့ တောင်စောင်း တောင်ကြောတလျှောက်မှာ စကိတ်စီးနေသူတွေကိုအပေါ်စီးက မြင်ရတဲ့ ရှုခင်းဟာ ရှုမဆုံးအောင်ကို လှပပါတယ်။ တောင်ပေါ်ကနေ တောင်အောက်ကို ကေဘယ်လ်ကားစီးတာ ဆယ်မိနစ်နီးပါးလောက်ကြာပါတယ်။
တောင်အောက်က စခန်းကတော့ စားသောက်ဆိုင်တွေအားကစားပစ္စည်းဆိုင်တွေ တောင်အောက်မှာပဲ စကိတ်စီးနေသူတွေနဲ့ ပိုပြီးစည်ကားနေပါတယ်။ ရေခဲပြင်မှာစီးဖို့ ဒလက်တွေတပ်ထားတဲ့ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကြီးကို ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် တပါတ်ဝင်စီးခဲ့ကြပါတယ်။ သူကတော့ တပါတ်စီးခ လာရီ ၅၀ ပေးရပါတယ်။ ရေခဲပြင် တာင်စောင်းတွေပေါ်မှာ ကိုယ်တိုင်မောင်းနိုင်ရင် ကိုယ်တိုင်မောင်း မမောင်းတတ်ရင် မောင်းပေးသူတွေရှိပါတယ်။ ညနေငါးနာရီလောက်မှာ တောင်ပေါ်စခန်းကနေ မြို့တော်ကို ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။
တီဘီလီစီကနေ ရေခဲတောင်ပေါ်ကိုသွားတဲ့ လမ်းတလျှောက်လုံးမှာ တောင်တက် တောင်ဆင်းကားလမ်းနဲ့အပြိုင် စီးနေတဲ့ Aragvi မြစ်ကို လမ်းတလျှောက်မှာပုံစံမျိုးစုံနဲ့ တွေ့ရပါတယ်။ မြစ်ကြောင်းတလျှောက်လုံးရေတွေခဲနေတော့ တချို့နေရာတွေမှာ စီးနေတဲ့ မြစ်ရေကိုတောင်မတွေ့ရပါဘူး။ နှင်းတွေ အထပ်ထပ်ဖုံးနေတဲ့ တောရယ် တောင်ရယ် မြစ်ရယ် လမ်းဘေးက မြို့လေးတွေ အိမ်လေးတွေရယ်ကို ဖြတ်ပြီးပြန်ရတဲ့ လမ်းမှာ ဆန်းကြယ်လွန်းတဲ့ သဘာဝအလှတွေကို ငေးမဆုံးအောင် ဖြစ်ရပါတယ်။
လမ်းတဝက်လောက်ရောက်တော့ Daba spring ကိုရောက်ပါတယ်။ ရေခဲတောင်ပေါ်က စီးလာတဲ့
ရေကို ပိုက်နဲ့သွယ်ပြီး ဘုံပိုင်ရေပိုက်လေး နှစ်ခုလုပ်ပေးထားတဲ့ သောက်ရေသန့်ဘုံပိုင်လေးပါ။ ကားတွေရပ်ပြီး ရေပိုက်က စီးကျနေတဲ့ ရေတွေကို သောက်ကြသလို ပုံးတွေနဲ့ ထည့်ပြီး နိုင်သလောက် သယ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ နှင်းတောင်ပေါ်ကစီးလာတဲ့ ရေခဲရေဟာ သန့်ရှင်း လတ်ဆတ်တဲ့ သောက်ရေသန့်ကွာလတီကိုမီတယ်လို့ ရေးထားလို့ လက်ခုပ်နဲ့ရေခံပြီး သောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ Daba Spring က သောက်ရေဟာ အေးစိမ့်ပြီး ကွာလတီကောင်းတဲ့ သောက်ရေသန့်ရဲ့ အရသာကို မီပါတယ်။
အဲဒီနေရာမှာပဲ ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုကို ထူးဆန်းစွာတွေ့ရပါတယ်။ ၂၀၀၈ ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ရုရှား ဂျော်ဂျီယာ စစ်ပွဲကြောင့် ဘာဂျိုမီဒေသမှာ သစ်တောပြုန်းတီးမှုနဲ့ ဂေဟစနစ်ပျက်ပြားမှုတွေ ဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်ခဲ့ပြီး သစ်တောဧရိယာ ဟက်တာဧက ၇၀၀ ကျော် ပျက်စီးခဲ့တယ်။
၂၀၁၃ မှာ ပျက်စီးခဲ့တဲ့ သစ်ပင်တွေကို အစားထိုးဖို့ သစ်ပင်တချို့ ပြန်စိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း UNDP ရဲ့အကူအညီနဲ့ ဒေသခံတွေကပါ သဘာဝ ပါတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းတွေကို အားတက်သရော ကူညီကြကြောင်းရေးထားပါတယ်။
ဒုတိယနေ့က ဟိုတယ်ကိုပြန်ရောက်တော့ check in ပြန်ဝင်ပြီး မြို့ထဲမှာ မရောက်သေးတဲ့ နေရာတွေကို လည်ဖို့ အပြင်ပြန်ထွက်ကြပါတယ်။ မြို့လည်လမ်းမကြီးပေါ်မှာ ခရစ်စမတ်ပွဲကို ဆင်နွှဲနေတဲ့
မိသားစုတွေကို လှုပ်လှုပ်ရှားရှားတွေ့ရတဲ့ ညတညပါပဲ။ ဒေသခံတွေဟာ ခရစ်စမတ်ပွဲကို ပါလီမန်ဟောက်စ်ရှေ့မှာ စည်စည်ကားကား ဆင်နွှဲနေကြပါတယ်။
ကျွန်မတို့လည်း ညဆို သန်းခေါင်ကျော်တဲ့အထိ စည်ကားနေတဲ့မြို့ လုံခြုံအေးချမ်းတဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့အတွက် အိပ်ချိန်ကလွဲလို့ မြို့ထဲက လမ်းမတွေပေါ်မှာ လည်နေဖြစ်တာများပါတယ်။
ထူးခြားတာလေးတစ်ခုကတော့ ဂျော်ဂျီယာသူ အသားဖြူဖြူချောချောလေးတွေဟာ မိတ်ကပ်လိမ်းတာနည်းပြီး မိတ်ကပ်လိမ်းသူတချို့ကတော့ မျက်နှာကို အညိုရောင်သမ်းစေတဲ့ မိတ်ကပ်တွေကို လိမ်းထားကြပါတယ်။ ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံမှာ လည်စရာ ကြည့်စရာ သဘာဝအလှတွေ
သမိုင်းဝင် နေရာတွေများလွန်းတော့ ဒုတိယနေ့ညမှာလည်း နောက်တနေ့လည်ရမယ့် နေရာကို ရွေးရပြန်ပါတယ်။ ဝိုင်ထုတ်လုပ်တဲ့ ဒေသက စိုက်ခင်းတွေ သမိုင်းဝင် ရှေးဟောင်းမြို့တွေ Underground river တွေအပါအဝင် လည်စရာနေရာတွေ အများကြီးရှိပေမယ့် နောက်တစ်ရက်အတွက်ကိုလည်း ရေခဲနေတဲ့ နောက်ထပ် တောင်ပေါ်မြို့ကို ထပ်ရွေးခဲ့ပါတယ်။
တတိယနေ့ ခရီးစဉ်ကတော့ ဘာဂျိုမီ (
Borjomi)ဆိုတဲ့ မြို့လေးနဲ့ ဘာကူရီယာနီ ( Bakuriani)ဆိုတဲ့ ရေခဲတောင် အပန်းဖြေစခန်းမြို့လေးပါပဲ။ တီဘလီစီကနေ ၁၈၄ ကီလိုမီတာဝေးပြီး တောင်ပေါ်လမ်းမို့ သုံးနာရီကျော်ကျော်မောင်းရပါတယ် ဒါပေမယ့် ကားခကတော့ ၂၂၀ လာရီပဲ ပေးရပါတယ်။ နှင်းတွေပိုထူ ပိုအေးပြီး လမ်းပိုဆိုးပါတယ်။ လမ်းဆိုးတယ်ဆိုတာက နှင်းခဲ ရေခဲတွေကြောင့် ခရီးမတွင်တာ လမ်းပိတ်နေတာတွေကို ပြောချင်တာပါ။ ဘာဂျိုမီမှာ မီးရထားဘူတာရုံလေးတစ်ခုရှိပြီး ဘာဂျိုမီကနေ တီဘလီစီကို တစ်ပါတ်ကို ရထားတစ်စီးထွက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဘူတာရုံလေးဘေးမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းနှစ်ရာကျော်က ရေနွေးငွေ့သုံး မီးရထားခေါင်းတွဲတစ်ခုကို တွေ့ရပါတယ်။
ဘာကူရီရာနီ အပန်းဖြေစခန်းကလည်း ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် မီတာ နှစ်ထောင်ကျော်မြင့်ပါတယ်။ ပထမနေ့က သွားခဲ့တဲ့ နေရာနဲ့ယှဉ်ရင် သူက ပိုပြီး အရိုင်းဆန်တယ်လို့ဆိုလို့ရပါတယ်။ ဒီဒေသလေးမှာလည်းတစ်နှစ်ကို လေးလကနေ ငါးလအထိ ရေခဲနေတတ်ပါတယ်။ နှင်းခဲတွေဟာ ပိုကြမ်းပြီး ပိုပြီး ကျစ်လျစ်သိပ်သည်းပါတယ်။ မှန်လုံပိတ် ကေဘယ်ကားမရှိတဲ့အတွက် တောင်ပေါ်ကို အမိုးဖွင့်ကေဘယ်တွေနဲ့ပဲ တက်လို့ရပါတယ်။ တောင်တက်လမ်းနှစ်ဆင့်လုံးကို ကေဘယ်နဲ့ တောက်လျောက်တက်ပြီး တောင်ထိပ်ကိုရောက်သွားပါတယ်။ ဒီတောင်တက်လမ်းက ပိုမတ်စောက်တယ် ရာသီဥတုပိုပြင်းပြီး တောင်ဆင်းလမ်း တောင်စောင်းတွေဟာလည်း ပိုပြီးစောက်မတ်တဲ့အတွက် ဒီနေရာမှာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ စကိတ်သမား အနည်းစုကိုပဲ တွေ့ရပါတယ်။
တကယ်တော့ ဘာကူရီယာနီ ရေခဲတောင် စခန်းဟာ အိုလံပစ်အားကစားပွဲတော်ရဲ့ စကိတ်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအတွက် စံချိန်စံညွှန်းနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ စခန်းဖြစ်လို့ ဝါရင့် ပြိုင်ပွဲဝင်တွေ လာလေ့ကျင့်ကြတာများတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေက စကိတ်စီးသူတွေ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် အထူးဂရုစိုက် စောင့်ကြည့်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ တောင်ပေါ်ရောတောင်အောက်မှာပါ လုံခြုံရေး ဝန်ထမ်းတ်ာတော်များများတွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်မတို့ တောင်ထိပ်မှာ ဓါတ်ပုံရိုက်နေချိန်မှာ စကိတ်သမားတစ်ယောက်နဲ့ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေ အခြေအတင်ဖြစ်နေတာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေက စကိတ်သမားကို ချုပ်ပြီး စီးထားတဲ့ စကိတ်တွေ လက်ကိုင်တုတ်တွေ သိမ်းသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ စကိတ်သမားဟာ အရက်မူးနေတယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက် တောင်ပေါ်ကနေ စကိတ်နဲ့ ဆင်းခွင့်မပြုတာပါ။ တောင်ပေါ်ကဆင်းပြီး မြို့တော်ကိုပြန်တော့ လမ်းမှာ ရေခဲတွေဖုံးပြီး လမ်းပိတ်နေတဲ့အတွက် ကားတွေ ပိတ်နေပြန်ပါတယ်။ ဒီမြို့လေးကတော့ ဂူဒါရီထက် နှင်းထုပိုထူပါတယ်။ နေရောင်သာရှိမနေဘူးဆိုရင် အလက်စကားကို ရောက်နေသလိုကို နှင်းတောကြီးထဲ ရောက်နေခဲ့တာပါ။ ကျွန်မတို့ သွားခဲ့တဲ့ တောင်ပေါ်စခန်းနဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာရှိတဲ့ တောင်ခြေက စကိတ်ကွင်းတွေထဲမှာ စကိတ်စီးသူတွေနဲ့ ကျိတ်ကျိတ်တိုး စည်ကားနေတာ ထပ်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
အဲဒီနေ့ကတော့ အပြန်ခရီးဟာ လေးနာရီလောက်ကြာပြီး ဟိုတယ်ကို မိုးချုပ်မှပြန်ရောက်ပြန်ပါတယ်။
ထုံးစံအတိုင်း မြို့ဟောင်းဘက်ကိုပြန်သွားပြီး ညစာထွက်စားရင်း မြို့ရဲ့ ညကို မရိုးနိုင်အောင် လှည့်ပါတ်ကြည့်ခဲ့ပါသေးတယ်။ နောက်နေ့ညနေလေယာဉ်နဲ့
ပြန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် နောက်ဆုံးနေ့မှာ ခပ်လှမ်းလှမ်းက နေရာတွေဆီသွားလည်ဖို့
မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ လေဆိပ်ကို နေ့လည် နှစ်နာရီဆင်းရမှာမို့ နေထွက်လို့ အိပ်ယာနိုးချိန် မနက်စာစားပြီးချိန်ဟာ အလိုလို ၁၀နာရီခွဲသွားတတ်တာမို့ ဝေးဝေးလံလံ လည်မယ့်အစီအစဉ်တွေ မဆွဲဖြစ်တော့ပါဘူး။
စတုတ္ထနေ့မှာတော့ မနက်စာစားပြီး ရသမျှ အချိန်တွေကို တဘလီစီမြို့ဟောင်းထဲက မသွားဘူးတဲ့ လမ်းတွေဆီ လမ်းလျှောက်ပြီး လည်ပါတယ်။ မြို့ဟောင်းက အိမ်အိုကြီးတွေ ပန်းခြံတွေ တောင်ကမ်းပါးပေါ်က နှစ်ပေါင်း နှစ်ရာကျော် သုံးရာ သက်တမ်းရှိတဲ့ ပြိုလုပြိုခင် အိမ်အိုအိမ်ဟောင်းတွေကို ငေးမောရင်း ကေဘယ်ကားစီးပြီး ဂျော်ဂျီယာရဲ့ မိခင်ရှိတဲ့ တောင်ကုန်းလေးပေါ်ကို နောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ထပ်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အနောက်ဖက်က လှေကားတွေကနေ ဆင်းသွားရတဲ့ ဘုရားကျောင်းတွေဆီကို သွားကြပါတယ်။ နေ့လည်စာကို ဂျော်ဂျီယာဒေသစာဖြစ်တဲ့ အာချာပူရီစားပြီး ဒီခရီးစဉ်ကို အဆုံးသတ်ကြပါတယ်။
နေ့လည်နှစ်နာရီမှာတော့ လေဆိပ်ကို ပြန်ဆင်းရင်း ရဲတိုက်မြို့တော်ကြီးကို နှုတ်ဆက်ခဲ့ရပါတော့တယ်။ ဒီခရီးစဉ်အတွက် တီဘလီစီကို အဲမရိတ်က ဖလိုက်မရှိတဲ့အတွက် ဖလိုင်းဒူဘိုင်းက လေယာဉ်လက်မှတ်ဝယ်ပြီး သွားရပါတယ်။ လေယာဉ်လက်မှတ်ဖိုး ( အသွားအပြန်)အပါအဝင် လေးညအိပ် ငါးရက်စာ စားသောက် လည်ပါတ်လို့ ကုန်ကျတဲ့စရိတ်က တစ်ယောက်ကို ဒေါ်လာ
ငါးရာ့ငါးဆယ်လောက်ပဲရှိပါတယ်။ ဒီကုန်ကျစရိတ်ထဲမှာ ရှော့ပင်းမောလ်မှာ ဈေးဝယ်တာတွေလည်းပါပါသေးတယ်။
တကယ်လို့ သုံးညအိပ် လေးရက်ခရီးသွားမယ်ဆိုရင် ဒီထက်မက စရိတ်သက်သာနိုင်သလို လေးရက်အတွင်းမှာ စိတ်ဝင်စားစရာ နေရာတော်တော်များများကို လည်လို့ရနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့လို ကားစင်းလုံးမငှားပဲ တိုးအစီအစဉ်တွေနဲ့ လည်မယ်ဆိုရင် လည်ပါတ်တဲ့စရိတ် စရိတ်ပိုသက်သာနိုင်ပါတယ်။ ဈေးအတော်သက်သာတဲ့ ဟိုတယ်တွေမြို့ထဲမှာ လည်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ အတိုချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ နှစ်ပေါင်းနှစ်ထောင့်ငါးရာကျော်သက်တမ်းရှိတဲ့ ရဲတိုက်တွေ သမိုင်းဝင်တဲ့ မြို့ဟောင်းကြီးနဲ့ ရေခဲဖုံးတောင်တန်း အပန်းဖြေစခန်းတွေရှိတဲ့ ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံဟာ အလွယ်တကူ သွားလည်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လို့ အခွင့်အခါသင့်ရင် သွားလည်သင့်ပါတယ်။ နိုင်ငံအလိုက် ဗီဇာ ကင်းလွတ်ခွင့်ရတဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ လင့်ခ်လေးက ဒီမှာပါ။ http://georgia.travel/visa-information
( ဓါတ်ပုံတွေအားလုံးက ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် လွတ်လပ်စွာ မျှဝေနိုင်ပါတယ်။)
နှင်း (မာယာ) 14 Jan 2017.
မြန်မာပြည်နဲ့ဝေးနေတယ်ဆိုပေမယ့် မြန်မာပြည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုတော့ သံယောဇဉ် ရှိနေတုန်း….ကိုယ်အကြာကြီး ကျင်လည်ခဲ့ဘူးတဲ့ နယ်ပယ်မို့ ဘယ်တော့မှ သံယောဇဉ်ပြတ်မယ်မထင်ဘူးရယ်။ ခရီးသွားရှားပါးတဲ့ကြားက ဟိုတယ်တွေ အပြိုင်အဆိုင် အခန်းတွေ အလုအယက်ရောင်းခဲ့ဘူးတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်း မမေ့သေးဘူး။
မြန်မာ့ခရီးသွားနဲ့ပက်သက်ရင် ဝဋ်နာကံနာတခုလို ယိုးဒယားကို မကျေမနပ်နဲ့ စိတ်ကောင်းမထားနိုင်သေးတာကတော့ မရင့်ကျက်မှုရဲ့လက္ခဏာ ။ ဘယ်လောက်အထိ မရင့်ကျက်သလဲဆို ဒီကိုရောက်ပီးမှ ပြည်ပကို အလည်အပါတ်ခရီးသွားဖို့ နိုင်ငံရွေးရင် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်ကို အမြဲ ကြက်ခြေခတ်ပစ်ခဲ့ဘူးတာ။
အခု ပြောင်းလဲချိန်တန်တာတော့ ပြောင်းလဲလာတယ် ရင့်ကျက်ချိန်တန်တော့ ရင့်ကျက်လာတယ်။ ဒီအတွက် လေ့လာရ သင်ယူရ သင်ခန်းစာယူရတာတွေက တပုံတပင်။
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေ ယိုးဒယားကို သဘောကျတယ် အရှေ့တောင်အာရှ ခရီးသွားဈေးကွက်မှာ ဘန်ကောက်က တိုးရစ်စ်တွေရဲ့ သည်းခြေကြိုက်ဆိုတာ ဟိုတုန်းတည်းက သိထားတယ် .. အခုတော့ ပိုသိလာတယ်။
တလောတုန်းက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ဘန်ကောက်ထရန်စစ်နဲ့ မြန်မာပြည်ပြန်တာ ကိုယ်က သူ့အတွက် ဖလိုက်တွေ ကြည့်ပေးရတယ်။ ဒူဘိုင်းကနေ ဘန်ကောက်ကို တနေ့ကို လေယာဉ် ခုနစ်စီးရှိတယ် အဲဒီ ခုနစ်စီးမှာမှ နှစ်ထပ်လေယာဉ် အဲဘတ်စ် 380 က အနည်းဆုံး သုံးစီးကနေ လေးစီးအထိရှိတယ်။ အားလုံးပြည့်လျှံနေတယ်။ ထရန်စစ်ခရီးသည်တွေကို ခဏမေ့ထား လေယာဉ်တစီးကို အနည်းဆုံး ခရီးသည် သုံးရာနှုန်းနဲ့ပဲ ပါးပါးလေးတွက် (
အဲဘတ်စ် အေ ၃၈၀ ( A-380) နှစ်ထပ်လေယာဉ် က လေယာဉ်တစီးကို ခရီးသည် ခြောက်ရာကျော်ပါတယ်) ဒူဘိုင်းကနေ ဘန်ကောက်သွားသူတွေ တနေ့ကို နှစ်ထောင့်တစ်ရာအနည်းဆုံးရှိတယ်။ တစ်နှစ်ကို ခုနစ်သိန်းခွဲကျော်ဆိုတဲ့ ကိန်းဂဏန်းက အဲမရိတ်လေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုတည်းက ခရီးသည်အရေအတွက်။
အခုတခါ အဲမရိတ်လေကြောင်းလိုင်းက မြန်မာပြည် ခရီးစဉ်စမယ်ဆိုတော့ ပျော်တာပေါ့။ ပျော်တာမှ မိုးမမြင်လေမမြင်ပျော်တာ။ မြန်မာပြည်ကို ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေ အဆင်ပြေပြေလာနိုင်ပီပေါ့။ ပထမဆုံးဖလိုက်ကစလို့ စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်မိတယ်။ စိတ်မကောင်းစရာ ရင်နာစရာက ဒူဘိုင်း ရန်ကုန် ဟနွိုင်း ပြေးတဲ့ ခရီးစဉ်မှာ ဗီယက်နမ်ကို သွားတဲ့ ခရီးသည်ကပိုများနေတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ဖော်မြူလာအရ ခရီးသည် ၃၂၀ လောက်ဆန့်တဲ့ ဖလိုက် အမြဲပြည့်နေတယ်ဆိုတော့ ပျမ်းမျှ ခရီးသည် ၃၀၀ နေ့စဉ်ထွက်နေတာ မြန်မာပြည်ကို ဘယ်လောက်ဝင်မယ်ထင်ကြလဲ။မြန်မာပြည်ကိုကျော်ပြီး ဗီယက်နမ်ကို ဘယ်လောက်ရောက်သွားကြတယ်ထင်လဲ။
ဒူဘိုင်း ရန်ကုန် ဟနွိုင်းပထမဆုံးဖလိုက်ထွက်တော့ လေယာဉ်ထွက်ချိန် နာရီဝက်ကျော်နောက်ကျတယ်။ ဘာလို့ဖလိုက်နောက်ကျလဲဆိုတော့ကာ မော်လ်ဒိုက်ကလာတဲ့ ဖလိုက်က ခရီးသည် ၁၄၀ ကျော် ဟနွိုင်းကိုလိုက်ဖို့ ချိတ်ထားလို့ သူတို့ကိုစောင့်ရင်းနောက်ကျခဲ့ရတာဆိုတော့ အိုးမိုင်ဂေါ့ပေါ့။ တကယ်လည်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေက တောင်ကျွန်းနဲ့ မြောက်ကျွန်းကို အဲသလိုကို အားရပါးရလည်ကြတယ်။ ဒါတွေကို စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပေမယ့် အသေးစိတ်ပြန်စဉ်းစားတယ်။ တိုးရစ်စ်တွေဟာ မြန်မာပြည်ကိုကျော်ပြီး ဗီယက်နမ်ကို သွားလည်ကြတယ် ဘန်ကောက်ကို လည်ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲပေါ့။
အဓိက သွားတွေ့တာက ကုန်ကျစရိတ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း ခရီးတခုသွားမယ်ဆို အနည်းဆုံး
ဘယ်လောက်ကုန်မယ် ကိုယ်ဘယ်လောက်သုံးမယ် ဘတ်ဂျက်ဆွဲပြီးမှ သွားတာကိုး။ ဒီမှာ
သွားတွေ့တာက အာရှနိုင်ငံတော်တော်များများဟာ တိုးရစ်စ်တွေအတွက် စရိတ်အင်မတန်သက်သာတာတွေ့တယ်။ စင်္ကာပူ မလေးရှား ဖိလစ်ပိုင် ဗီယက်နမ် ဘန်ကောက်
အင်ဒိုနီးရှား ကိုယ်ရောက်ဖူးတဲ့ အာရှနိုင်ငံတွေထဲမှာ ဗီယက်နမ်က အတော် စရိတ်သက်သာသေးတယ်ပြောလို့ရတယ်။ စင်္ကာပူကတော့ နည်းနည်းဈေးကြီးလို့ စရိတ်သက်သာတဲ့စာရင်းက ခဏဖယ်ထားတယ်။
ဗီယက်နမ်မှမဟုတ်ပါဘူး လက်ထဲမှာ ဒေါ်လာ နှစ်ရာလောက်ရှိရင် ဖိလစ်ပိုင် မလေးရှား အင်ဒိုနီးရှား ကြိုက်သလောက်လည် ကြိုက်သလောက်စား သုံးရက်လောက်အသာလေးနေလို့စားလို့ရတယ်။ ကိုယ်ရွေးမယ့် ဟိုတယ်တော့ သေချာရွေးရတာပေါ့။ ( ကြယ်ငါးပွင့် ကြယ်လေးပွင့်ဟိုတယ်တွေတော့ မဆိုလိုပါဘူး) ဒီနေရာမှာ ခရီးသွားသူတွေကို အကြမ်းဖျင်းခွဲခြားကြည့်တော့ မကြာခဏ ခရီးသွားနေကြတာက ကိုယ့်အနားက မိတ်ဆွေတွေ .. သိပ်ချမ်းသာတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူး။ အလုပ်က မိတ်ဆွေတွေဆို ဘန်ကောက်ကို သူ့အိမ်သူယာလို သဘောထားပြီး နှစ်လတစ်ခါလောက်သွား တခါသွားရင် လေးငါးရက် အေးအေးဆေးဆေးနေကြသေးတာ။ သိပ်ချမ်းသာတဲ့သူတွေကျတော့ နိုင်ငံရွေးပီပေါ့။
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သွားနိုင် လည်နိုင်တဲ့လူတန်းစားဟာ သူတို့အတွက် သွားဖို့ လည်ဖို့ အချိန်ရှိတယ်။ ခရီးသွားဖို့ သိပ်မများတဲ့ ဘတ်ဂျက်ကို သုံးကြတယ်။ ဒီလိုလူတွေအနေနဲ့ မြန်မာပြည်မားကတ်ကို ဘယ်ကပ်နိုင်မလဲနော်။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ရဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်း နိုင်ငံခြားသားတွေအတွက် ပေးနေတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုစရိတ်တွေ ခရီးစရိတ်တွေ ကိုယ်အသိဆုံး။ နိုင်ငံခြားသားတွေအတွက် ယူတဲ့ ပြည်တွင်းလေယာဉ်လက်မှတ်ဈေးက အမေရိကားနဲ့ တရုတ်ပြည် ဘတ်ဂျက်အဲလိုင်းနဲ့ သွားလို့ရလောက်သေးတယ်။
လေယာဉ်လက်မှတ်တွေ ဈေးကြီးလို့ ဟိုတယ်တွေ သက်သာမလားမေး နိုးပါ။ အစားအသောက် ဈေးနှုန်း ထူးမခြားနားဆိုတော့ တော်ရုံချမ်းသာမှုနဲ့ မြန်မာပြည်ကို အလည်မလာနိုင်လောက်ဘူး။
အလှအပပိုင်း သန့်ရှင်းရေးပိုင်းကြည့်မလား ဗီယက်နမ်က မြန်မာပြည်ထက်ပိုလှမယ် ပိုသန့်မယ် … ဗီယက်နမ်ကိုဘယ်လိုမြင်မိလဲဆိုရင် မဆလခေတ်က မြန်မာပြည် တစိတ်တပိုင်းကို ပြန်မြင်ရသလိုပဲ ခံစားရတယ်။ သိပ်လှတယ် သိပ်သန့်တယ် … သူတို့နိုင်ငံမှာ တော်ရုံချမ်းသာမှုမျိုးနဲ့ ကားမစီးနိုင်တော့ ကားလမ်းမတွေဟာ
ရှင်းလင်းနေတတ်တယ်။ ကိုယ်ရောက်ခဲ့တဲ့ ဟိုချီမင်းက ကမ္ဘာ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်မြို့တော်တွေထဲမှာ ပါတယ်ဆိုပေမယ့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်သမားတွေ အင်မတန်စည်းကမ်းကောင်းကြတယ်။ မန္တလေးက မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေလို ပရမ်းပတာမတွေ့မိဘူး။
ဘန်ကောက်က မြန်မာပြည်နဲ့ သိပ်မကွာသလိုပဲ ခံစားရတယ်။ သိပ်အသန့်ကြီးမဟုတ်ဘူးလားလို့ ( ကိုယ့်တစ်ယောက်တည်း အမြင်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်)
သူများတိုင်းပြည်တွေနဲ့ နေရာတကာယှဉ်တယ်လို့ မပြောစေချင်ဘူး။ အာရှနိုင်ငံတိုင်းက သူ့နေရာနဲ့သူ အားနည်းချက်တွေရှိကြတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်သွားလည်တုန်းက သူငယ်ချင်းမလေးက ကြိုသတိပေးထားတယ် သူတို့ဆီမှာ ခါးပိုက်နိုက်တွေ သူခိုးတွေ ပေါသတဲ့ သတိထားပါ မလိုအပ်ပဲ တန်ဘိုးကြီးတာတွေ မယူလာနဲ့ လက်ဝတ်ရတနာတွေ ချွတ်ထားခဲ့တဲ့။
သူကိုယ်တိုင်လည်း လက်ဝတ်ရတာနာ မဝတ်ဘူး အပြင်ထွက်ရင်လည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါး key pad ဖုန်းနဲ့ထွက်တယ်။ အလစ်သုတ်သမားတွေက လမ်းပေါ်မှာ ဖုန်းတွေဘာတွေပါ လုကြတာလေ။ ဒါကျတော့ မလေးရှားတို့ အင်ဒိုနီးရှားတို့နဲ့ တထပ်တည်းသွားတူတယ်။ အဲဒီတုန်းကတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ ဒါမျိုးမကြောက်ရဘူးဆိုပြီး ပျော်နေခဲ့သေးတာ။ ဒါပေမယ့် မျက်မှောက်ကာလအခြေအနေမှာ မြန်မာပြည်ရဲ့ သူခိုး ခါးပိုက်နှိုက်တွေရဲ့ သတင်းက အာရှနိုင်ငံတွေကို မီရုံမက ကျော်တက်သွားတာတွေ့ရတယ်။
သဘာဝအလှတွေက သူ့နေရာနဲ့သူ သူ့အရပ်နဲ့ သူ့ဇာတ် လှကြတာပါပဲ။ ဒီသဘာဝတွေကို သပ်သပ်ယပ်ယပ်ဖြစ်အောင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပြီး ပိုက်ဆံယူနေကြတာပဲကွာတယ်။ တန်ရာတန်ကြေးယူကြတာနဲ့ မတန်မရာယူတာရယ်လို့တော့ ကွာတာပေါ့။ ခရီးသွားတွေ မြန်မာပြည်ကိုကျော်ပြီး
ဘန်ကောက် ဗီယက်နမ်တွေကို လျှံထွက်သွားရခြင်းမှာ တိုင်းပြည်ရဲ့ လူမှုရေး စီးပွားရေး နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေလည်းပါနိုင်ပါတယ်။
ဒီကန္တာရတိုင်းမှာက မတ်လကနေ စက်တင်ဘာလကုန်အထိ နွေရာသီ …. ဇွန် ဇူလိုင် သြဂုတ်ဆိုတာ အင်မတန်ပူပြင်းတဲ့လတွေ ။ ဒီတော့ ဒီတိုင်းပြည်က ဌာနေ လူဆင်းရဲ လူချမ်းသာမှန်သမျှ နွေအပူရှောင်ကြတယ်။ ဇွန် ဇူလိုင် သြဂုတ်ဆိုတာ လေဆိပ်မှာ အင်မတန် အလုပ်များတဲ့ ရာသီ ဒီကထွက်သမျှဖလိုက်တွေ ပြည့်ရုံမက လျှံထွက်နေတတ်တယ်။
အားလုံးက လည်လည်သွားကြတာ ကမ္ဘာတလွှား လည်လို့ ပါတ်လို့ကောင်းတဲ့ နိုင်ငံတွေကို သွားလည်ကြတာ။ ကိုယ်ရှာထားတဲ့ပိုက်ဆံတွေ သူများနိုင်ငံမှာသွားသုံးကြတာ။
အင်မတန်ချမ်းသာတဲ့သူရော သိပ်မချမ်းသာသူတွေပါ ဥရောပမှာ တလကိုးသီတင်းသွားနေတတ်ကြတယ်။ ဘန်ကောက် စင်္ကာပူလောက်က အိမ်ရှေ့နဲ့ အိမ်နောက်လို ကူးကြတာ။ ငွေကို ရေထက်ပေါပေါများများသုံးနိုင်သူတွေ မြန်မာပြည်ကို မလည်ကြတာတော့ နည်းနည်း အံ့သြမိတယ်။ မလည်ချင်ကြတာကိုပဲ တခါတလေ ကျေးဇူးတင်ရမယ်။ ( ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကလူတွေရဲ့ အခြေခံစိတ်ဓါတ်တွေ လူတန်းစားခွဲခြားမှုတွေ သဘောထားကြီးမှုတွေကို ကိုယ်သာ အသိဆုံးလေ)။
အခုတောင် ရန်ကုန်ကို လေယာဉ်တိုက်ရိုက်ရှိတော့ အလုပ်က မိတ်ဆွေတွေ ရန်ကုန်လာဖို့ မေးကြမြန်းကြ စပ်စုကြ မလာနဲ့ပြောလို့ စိတ်ဆိုးကြနဲ့။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်အကြောင်း သိသူတွေက သိကြတယ် နားစွန်နားဖျားကြားပြီး လန့်သူတွေကလန့်ကြတယ်။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို လာလည်ဖို့ ကြောက်ကြသူတွေကိုတွေ့တော့ ကိုယ့်မှာ စိတ်ချမ်းသာရ ပျော်ရတယ်.. ( ဒီလိုလူတကာ လန့်ရတဲ့ နိုင်ငံမျိုးမှာ လူဖြစ်ခွင့်ရတာ နည်းတဲ့ ကုသိုလ်လား)။ လက်ရှိ အခြေအနေအရ သူတို့လာလည်ပြီး ပြဿနာတွေဖြစ်ရင်တော့ ကိုယ်ပဲ စိတ်ညစ်ရမှာလေ။
ကိုယ့်အိမ်ကို ဧည့်သည်လာမှာ ကြောက်တဲ့လူမျိုး မြန်မာလူမျိုးလို့ပြောရမလိုဖြစ်နေတယ်။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်လှတယ် စိမ်းလန်းတယ်လို့ ကြွားရမလား ငြိမ်နေရမလားမသိ… လှနေ
စိမ်းလန်းနေတာ ကိုယ့်တနိုင်ငံတည်းမှမဟုတ်တာ။ ကန္တာရတိုင်းပြည်တောင် သစ်ပင်တွေ စိမ်းစိုနေအောင် တောအုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်ထားသေးတာ။ အာရှနိုင်ငံတိုင်း သူ့သဘာဝနဲ့သူလှကြတယ်။ မြန်မာပြည်တပြည်တည်း ထူးပြီးလှနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်သတိပေးရတယ်။ ဟိုးတုန်းကတော့ ကိုယ်က ဘယ်မှမရောက်ခဲ့ဘူးတော့ သိပ်လှတဲ့ ရွှေမြန်မာလို့မျက်စိမှိတ်ပြီး ကြွားချင်ခဲ့တာလေ။
အဓိကပြောချင်တာက လေကြောင်းလိုင်းတွေ ပလူပျံအောင်
ပြေးနေသော်ငြား ပြည်တွင်းမှာ တိုးရစ်စ်တွေအတွက် သက်တောင့်သက်သာဖြစ်အောင် ဘာမှ မဖန်တီးပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ ဘာကိုမှ မျှော်လင့်လို့မရဘူးဆိုတာပါပဲ။
အစိုးရပြောင်းလည်း ပြောင်းတာပဲရှိမယ်။ လက်ရှိပြည်သူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေတောင် မဖြည့်နိုင်ရင်တော့ နိုင်ငံတကာက ခရီးသွားတွေကို မျှော်ဖို့ အင်မတန်ဝေးနေပါသေးတယ်။
ယိုးဒယား ဗီယက်နမ်တွေရထားတဲ့ မားကတ်တွေကို လိုက်မီဖို့ သူတို့သွားနေတဲ့ ပေါ်လစီတွေနဲ့ တန်းညှိပေးမှဖြစ်တော့မယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ ခရီးသွားတွေဟာ မြန်မာပြည်ကိုကျော်ပြီး ယိုးဒယားကိုသွားမယ် မြန်မာပြည်ကို ငုံ့ကြည့်ပြီး ဗီယက်နမ် ကမ္ဘောဒီးယား လာအို အိမ်နီးချင်းတွေဆီရောက်သွားကြလိမ့်မယ်။ သိပ်မထူးဆန်းဘူး … လေယာဉ်လက်မှတ်ဝယ်ပြီး သုံးလေးရက်ကို ဒေါ်လာနှစ်ရာလောက်နဲ့
အမုန်းလည်လို့ရတဲ့ တိုင်းပြည်တွေ အာရှတိုက်ထဲမှာ တပုံကြီး အများကြီးရှိတယ်လို့….တစ်ရက်ကို ဒေါ်လာ သုံးလေးဆယ်လောက်နဲ့ တည်းလို့ရတဲ့ ဟိုတယ်သန့်သန့်တွေ ယိုးဒယား ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေမှာ မှိုလိုပေါက်နေတာ တခုနဲ့တခု ငါးမိနစ်တောင် လမ်းလျှောက်စရာမလိုဘူးလို့….
အခုတော့ ရန်ကုန် ဟနွိုင်း ဖလိုက်ကို စိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်ခြင်းကို ခဏရပ်ထားတယ်။ ဟနွိုင်းရဲ့ ခရီးသွားမားကတ်ကို ရန်ကုန်က မယှဉ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သိလိုက်ရလို့။ ပြီးတော့ နောက်တချက်က ပြည်တွင်းမှာ ထားဝယ် မြိတ်လောက်ကို လေယာဉ်နဲ့သွားလို့
ကုန်တဲ့ ခရီးစရိတ် နေထိုင်စားသောက်လို့ ကုန်တဲ့ စားရိတ်က ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကို တောင်နဲ့ မြောက်အားရပါးရ လည်လို့ပါတ်လို့ရတဲ့ စရိတ်နဲ့လည်း ညီမျှနေသေးတယ်။
ပြည်တွင်းက ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်တွေ မိတ်ဆွေ တိုးဂိုက်တွေ ကုမ္ပဏီတွေ ဟိုတယ်တွေကိုတော့ အားနာမိပါရဲ့။ အားနာနာနဲ့
သုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်လေ… ရင်ဘတ်ဟောင်းလောင်းနဲ့ ဟိုတယ်တွေ ရုံးခန်းဟောင်းလောင်းနဲ့ ခရီးသွားကုမ္ပဏီတွေ မြန်မာပြည်ထဲမှာ ပေါသထက်ပေါလာမှာတော့ သေချာသလောက်ပါပဲလို့….`
အိပ်မက်ထဲက ကျွန်း ( Seychells )
ခရီးတစ်ခု သွားမယ် လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာမို့ ရုရှားနဲ့ အာမေးနီးယား နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံကြားက
ဂျော်ဂျီယာကို သွားလည်ဖို့ သူငယ်ချင်းနဲ့ တိုင်ပင်ထားခဲ့တာ။ တကယ်တမ်းသွားဖို့ ရက်နီးလာတော့
ဂျော်ဂျီယာကို သွားလည်သူတွေထဲက တချို့ကို Tbilisi က လက်မခံပဲ ပြန်လွှတ်တယ်လို့ ကြားရတယ်။
တကယ်တော့ ဒူဘိုင်းကနေ Tbilisi မြို့ကို လေယာဉ်စီး တဘလီစီ ကနေမှ ဂျော်ဂျီယာကို ရထား
လေးနာရီလောက် ထပ်စီးရတာ။ တဘလီစီ မြို့က လက်ရှိ
ဖြစ်နေတဲ့ စစ်ပွဲတွေကြောင့် လုံခြုံရေးအရ ခရီးသည်တွေကို လက်မခံတာဆိုတော့ အဲဒီခရီးစဉ်အစား
အခြားတနိုင်ငံကိုသွားလည်ဖို့ ခရီးစဉ် ပြန်ပြောင်းဆွဲရပါတယ်။
ကျွန်မ ဆန္ဒရှိတဲ့ ကျွန်းကိုသွားတဲ့ ဖလိုက်တွေကချောင်နေတာမို့ အိပ်မက်ထဲက ကျွန်းတွေဆီကို
Seychells လို့ခေါ်တဲ့ ကျွန်းနိုင်ငံလေးဟာ အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာထဲမှာ ရှိပြီး ကျွန်းကြီး သုံးကျွန်းစုစည်းထားတဲ့
ကျွန်းနိုင်ငံလေးတစ်ခု။ ဆေးရှဲလ်ရဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ မဒါဂတ်စကားကျွန်း မော်လဒိုက်ကျွန်း
မော်ရီးရှပ်ကျွန်းစု နဲ့ ကော်မိုရိုစ့်ကျွန်းစုတွေ ရှိပါတယ်။ ဆေးရှဲလ်ကတော့ အာဖရိကတိုက်ရဲ့
အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဆိုတော့ ဆိုမားလီးယား နဲ့ ကင်ညာနိုင်ငံတွေရဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာ ရှိတယ်။
အသွင်အပြင်ကတော့ အာဖရိက လူမျိုးစုရဲ့ အသွင်အပြင်အတိုင်းပါပဲ ဒါပေမယ့် ဆေးရှဲလ် ကျွန်းသူကျွန်းသားတွေရဲ့
အသားအရေက အညိုရောင်သမ်းပါတယ် မျက်နှာကျ သွယ်ပါတယ် အခြားအာဖရိကတွေလောက် အသားမမည်းကြပါဘူး။
လူတိုင်းစေ့ အင်္ဂလိပ်စကားကို ရေရေလည်လည် သွက်သွက်လက်လက် ပြောနိုင်ကြပါတယ်။
လူဦးရေ ခုနစ်သောင်းသာရှိတဲ့ ကျွန်းကြီးက တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီး အေးချမ်းလွန်းတယ်လို့
ဆိုလို့ရပါတယ်။ ကျွန်းပါတ်ပါတ်လည်မှာ ကားလမ်းတစ်လမ်းဖောက်ထားပြီး ကားလမ်းဟာ ကမ်းခြေပါတ်လမ်းတစ်ခုပါ။
ကားလမ်းရဲ့ ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ ကမ်းခြေတွေ အစီအရီတွေ့ရပြီး ကားလမ်းရဲ့ ညာဘက်ခြမ်းမှာတော့
ကမ်းပါးခပ်မြင့်မြင့် တောင်စောင်းတွေပေါ်မှာ ဆောက်ထားတဲ့ တိုက်တွေ အစီအရီ တွေ့ရပါတယ်။
ခုနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ဆေးရှဲလ်နိုင်ငံရဲ့ ထူးခြားချက်က ပြည်နယ်တိုင်းမှာ ဘုရားကျောင်းတစ်ခုစီ
ရှိနေသလို ဘုရားကျောင်းနဲ့ တွဲလျက်မှာ စာသင်ကျောင်းတွေ ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံသားတိုင်း
အသက် ၁၅ နှစ်အထိ အခမဲ့ ပညာသင်ယူခွင့်ရှိပါတယ်။ ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုကလည်း အခမဲ့ပါ။
ပညာရေးနဲ့ပက်သက်ပြီး သင်ရိုးတွေအားလုံးက ဗြိတိသျှ သင်ရိုးကို အခြေခံပါတယ်။ တက္ကသိုလ်အနေနဲ့တော့
သြစတြေးလျက လာဖွင့်ထားတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းတစ်ကျောင်း ရှိပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ပညာဆည်းပူးလိုသူတွေအတွက်
ပညာတော်သင်လျှောက်ထားခွင့်ရှိသလို နိုင်ငံခြားမှာ တက္ကလိုလ် တက်ချင်ရင်လဲ တက်ခွင့်ရှိပါသေးတယ်။
ခရီရိုး ( Creole) ဘာသာဖြစ်ပြီး ရုံးသုံး ဘာသာစကားကတော့ အင်္ဂလိပ်စာပါ။ ပြင်သစ်ကိုလိုနီ
ဖြစ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံမို့ မိခင်ဘာသာစကားဟာ ပြင်သစ်သံဘက်နီးတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်နေပြီး
နိုင်ငံသားတော်တော်များများဟာ ပြင်သစ်ဘာသာစကားကိုလဲ ပြောနိုင်ကြပါတယ်။
ဆေးရှဲလ်နိုင်ငံမှာ ပင်လယ်စာ အစုံမရပါဘူး။ ပုဇွန်မရှိပါဘူး ဂဏန်းရှားပါးပါတယ် ငါးအစုံမရပါဘူး။
ပုဇွန်ကို ရေချိုကန်တွေနဲ့ မွေးခဲ့ဘူးပေမယ့် ရေချိုပုဇွန်လုပ်ငန်းဟာ အရှုံးပေါ်လို့ ရပ်လိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အဓိက ထုတ်ကုန်အနေနဲ့ ငါးသေတ္တာစက်ရုံသာရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီတော့ ဆေးလ်ရှဲနိုင်ငံဟာ
ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုသာ အဓိက မှီခိုနေရပါတယ်။ ခရီးသွား လုပ်ငန်းကို မှီခိုရတယ်ဆိုပေမယ့် ကြယ်ငါးပွင့်အဆင့်ရှိတဲ့ ဟိုတယ်ကြီးတွေဟာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသက
စော်ဘွားတွေ ဖွင့်ထားတဲ့ ဟိုတယ်တွေ ဖြစ်နေတာပါပဲ။ သူတို့ နိုင်ငံသားပိုင်ဟိုတယ်တွေက
ကြယ်သုံးပွင့် ဟိုတယ်လေးတွေများပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ကြတဲ့
နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ ပညာရေး ကျန်းမာရေးအတွက် သူတို့လစာထဲက မျှဝေကျခံကြရပါတယ်။ အနိမ့်ဆုံးလစာကတော့
တစ်လကို ဆေးလ်ရှဲရူပီး ၄၅၀၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၂၉ ဒေါ်လာ) လို့ဆိုပါတယ်။ အဆင့်မြင့်အရာရှိတွေ
နိုင်ငံခြားသားတွေကတော့ လစာကောင်းကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ထုတ်ကုန်မရှိပဲ စားဝတ်နေရေးအတွက်
သွင်းကုန်တွေကိုသာ အဓိက မှီခိုနေရပေမယ့် သူတို့နိုင်ငံလေးမှာ ဆင်းရဲ ချမ်းသာ ကွာဟမှု
မရှိပါဘူး။ အားလုံး တန်းတူနေနိုင်စားနိုင်သလို နိုင်ငံသားတိုင်းဟာ သူတို့ဘဝတွေအပေါ်
ရောင့်ရဲတင်းတိမ် ပျော်ရွှင်နေကြတာကို သတိထားမိပါတယ်။
ကမ်းခြေတစ်လျှောက်မှာ ဖောက်ထားတဲ့ အဓိက ကားလမ်းလေးတစ်လမ်းသာရှိပါတယ်။ ကားလမ်းဘေးတလျှောက်မှာ
သစ်ရွက်တွေ အမှိုက်တွေ မရှိရလေအောင် မြူနီစပါယ် ဝန်ထမ်းတွေက အလုပ်ကြိုးစားကြပါတယ်။ လမ်းလေးဝဲယာမှာ
အစိမ်းရောင် အမှိုက်ပုံးကြီး လေးပုံးကိုတွဲရက်သား နေရာတိုင်းမှာ တွေ့ရပါတယ်။ တောထဲတောင်ထဲမှာပါ
အမှိုက်ပုံးတွေ စနစ်တကျ ထားထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဆေးရှဲလ် လေဆိပ်ကို လေယာဉ်ဆိုက်တော့ လေယာဉ်ကွင်းသေးသေးလေးက ကမ်းခြေနဲ့ တပြေးတည်းဆောက်ထားတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။
လေယာဉ်ကွင်းသေးသေးဆိုပေမယ့် ဘိုးရင်း ၇၇၇ လေယာဉ်ကြီးတွေ ဆင်းကြပါတယ်။ ကမ်းခြေနဲ့ တပြေးတည်းဖောက်ထားတဲ့
လေယာဉ်ပြေးလမ်းတိုတိုလေးကချစ်စရာကောင်းသလို အသည်းထိတ်စရာကောင်းလှပါတယ်။ တကယ်ဆို ဒီလေယာဉ်ကွင်းလေးက
မြန်မာပြည်က ဟဲဟိုးတို့ မြိတ်တို့က လေယာဉ်ကွင်းတွေလို ခပ်သေးသေး ကျဉ်းကျဉ်းလေး။ လေယာဉ်ကွင်းက
တောင်တန်းနဲ့ ပင်လယ်ကမ်းခြေကြားက လမ်းခပ်ကျဉ်းကျဉ်းလေးနဲ့ဆင်တယ်။
ကျွန်းသုံးကျွန်းနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပြီး မာဟီဆိုတဲ့ ကျွန်းက အဓိကအချက်အခြာ ကျွန်းကြီးလို့
ပြောလို့ရပါတယ်။ လေဆိပ် ဆိပ်ကမ်းနဲ့ အဓိက မြို့လေးဖြစ်တဲ့ ဗစ်တိုးရီးယား မြို့လေးကို
အချက်အချာ ဖြစ်တဲ့ ဗစ်တိုးရီးယားမှာသာ နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားတွေအတွက် စားသောက်ဆိုင်တွေ
ဘဏ်တွေ လေယာဉ်ရုံးတွေနဲ့ အဓိက ဈေးတွေရှိပါတယ်။ အခြားနေရာတွေမှာတော့ မီနီမားကတ်သာသာ
စတိုးဆိုင်လေးတွေပဲရှိပြီး စားသောက်ဆိုင်ကောင်းကောင်းရှားပါတယ်။ ခရီးသွားတွေအတွက်တော့
စရိတ်မသက်သာလှပါဘူး။ ဒေသခံတွေအနေနဲ့ ငါးအကောင်ခပ်လတ်လတ် ၁၂ ကောင်လောက်ပါတဲ့ ငါးတွဲ
တစ်တွဲကို ရူပီး ငါးဆယ်သာပေးရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စားသောက်ဆိုင်မှာ ကျွန်မတို့ ငါးကြော်နဲ့
အာလူးချောင်းကြော်မှာတော့ တစ်ပွဲကို ရူပီး နှစ်ရာပေးရပါတယ်။ ကြက်ဥကတော့ တစ်လုံးကို
သုံးကျပ်ခွဲနဲ့ စတိုးဆိုင်လေးတွေမှာ ဝယ်လို့ရပါတယ်။ လေယာဉ်ကွင်းကို လေယာဉ်ဆိုက်တော့ လဝက ကောင်တာတွေဆယ်ခုလောက်
ဖွင့်ပေးထားပါတယ်။ ဆေးရှဲလ် နိုင်ငံရဲ့ ထူးခြားချက်က ဘယ်နိုင်ငံသားမဆို ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ရတယ်
ဗီဇာ မလိုပဲ ဟိုတယ်ဘွတ်ကင်ရှိသလောက် နေခွင့်ပေးတယ် တစ်လထက်ပိုနေချင်ရင်တော့ ဟိုရောက်ပြီးမှ
ထပ်လျှောက်ရတယ်။ ဒီတော့ ကမ္ဘာပေါ်က မာဖီးယားတွေ တံခါးမရှိ ဓါးမရှိ ဝင်လို့ ထွက်လို့ရနေတဲ့
နေရာတစ်ခုလို့ ပြောကြတယ်။ လေယာဉ်ကွင်း
အဆောက်အဦထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ ကောင်တာပေါ်မှာတွေ့တဲ့ မြေပုံ သုံးလေးခုကို ယူခဲ့တယ်။ ဒီကျွန်းကို
ရောက်ဖူးတဲ့ သူငယ်ချင်းက သေသေချာချာမှာလိုက်တာ မြေပုံကို လေယာဉ်ကွင်းကလွဲလို့ ဘယ်မှာမှ
မရဘူး ဒီတော့ လေဆိပ်မှာ မြေပုံရအောင်ယူခဲ့ အကျိုး မယုတ်ဘူးတဲ့ ။သူတို့နိုင်ငံက သစ်တောထွက်
အစားအသောက်တွေ ယူသွားလို့မရပါဘူး။ အစားအသောက်တော်တော်များများ လေဆိပ်မှာ သိမ်းတယ်လို့
လဝကကောင်တာကိုဖြတ် ခရီးဆောင်အိတ်တွေရွေး ပြီးတာနဲ့
အပြင်ကိုထွက်တော့ ဟိုတယ်က လာကြိုတဲ့ ကားသမားက ဆိုင်းဘုတ်လေးကိုင်ပြီး ကြိုနေတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။
လေဆိပ်ကနေ ဟိုတယ်ကို ဆယ်မိနစ်လောက်လေးမောင်းရတာကို ကားခ ယူရို အစိတ်ကျပါတယ်။
ကားထဲမှာ ဆေးရှဲကျွန်းက ကြိုဆိုပါတယ် ဆိုတဲ့ သီချင်းသုံးပုဒ်လောက်ကို ဖွင့်ထားပေးတယ်။ဆေးရှဲလ်က
ဟိုတယ်တွေက ဈေးတော့ မသက်သာလှဘူး။ ကြယ်ငါးပွင့် အဆင့်ရှိတဲ့ ဟိုတယ်ကြီးတွေဆို တစ်ညကို
ယူရို တစ်ထောင်ကျော်လောက်ပေးရတယ်။ ကျွန်မတို့ ရွေးထားတဲ့ ကြယ်သုံးပွင့်အဆင့်ဟိုတယ်ကတော့
တစ်ညကို ယူရို တစ်ရာ့ရှစ်ဆယ်ပေးရတယ်။ မနက်စာမပါဘူး မီးဖိုချောင်ထဲမှာ ချက်ပြုတ်စားဖို့
အိုးခွက် ပန်းကန်အစုံအလင်နဲ့ ကော်ဖီတွေ လက်ဖက်ရည်တွေတော့ ထည့်ပေးထားတယ်။ ကြယ်ငါးပွင့်
ဟိုတယ်တွေကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ ဟိုတယ်တွေမှာ မနက်စာ မရတာမျိုး။ လမ်းဘေးမှာ
ငါးတွေ သစ်သီးတွေရောင်းတယ် ငွေဆောင်တို့ ချောင်းသာတို့မှာလို ငါးတွေဝယ်ပြီးရင် ချက်ပေးတဲ့သူတွေ
ရှိတယ်။ သစ်သီးတွေရောင်းတယ်ဆိုပေမယ့် ပါချီပါချက်.. သစ်သီးအစုံမတွေ့ရဘူး.. တောထဲကရတဲ့
အုန်းသီး ငှက်ပျောသီး သင်္ဘောသီးနဲ့ စောင်းလျားသီးလောက်ပဲ တွေ့ရတယ်။
တောင်စောင်းလေးပေါ်မှာရှိတယ် အောက်ကို ငါးမိနစ်လောက် ဆင်းလိုက်ရင် ကမ်းခြေကိုရောက်တယ်။
ကမ်းခြေကတော့ အဆုံးမရှိတဲ့ ကမ်းခြေတွေ။ ကျွန်မတို့ ဟိုတယ် ပိုင်ရှင်က လေယာဉ်မှူးလင်မယား
သူတို့မှာ အသက် ဆယ့်ငါးနှစ်အရွယ် ခွေးလေးတစ်ကောင် ဆယ်နှစ်အရွယ် သမီးလေးနဲ့ ငါးနှစ်အရွယ်
သားလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ တောင်စောင်းလေးမှာ သူတို့နေတဲ့ တိုက်လေးတစ်လုံး လက်ရှိဟိုတယ်အတွက်
နှစ်ထပ်တိုက်ပုလေးတစ်လုံးနဲ့ နောက်ထပ် တိုက်လေးတစ်လုံးထပ်ဆောက်နေတယ်။
တနိုင်တပိုင် တိုက်ပုလေးတွေ ဆောက်ပြီး Self catering တည်းခိုခန်းလေးတွေ နေရာတိုင်းမှာ
ဆောက်ထားကြတာတွေ့ရတယ်။ ကျွန်မတို့ ရောက်သွားတဲ့ ဟိုတယ်လေးက အိမ်တစ်အိမ်ရဲ့ အပြင်အဆင်အတိုင်း
သပ်သပ်ရပ်ရပ် လှလှပပလေး ။ ဧည့်ခန်းနဲ့ မီးဖိုခန်းကျယ်ကြီးရယ် ဝရန်တာ ပါတ်ပါတ်လည်နဲ့
အိပ်ခန်းနှစ်ခန်းပါတဲ့ အိမ်လေးက ဟိုတယ်တစ်ခုနဲ့မတူပဲ ကိုယ့်အိမ်လေးကို ရောက်နေသလို
နှစ်ထပ်တိုက်ပုလေးပတ်ပတ်လည်မှာ ဝရန်တာ အပြည့် အခန်းတွေက
မှန်တွေအပြည့်ဆိုတော့ အိမ်ပါတ်ပါတ်လည်က တောတောင် သဘာဝအလှတွေ မျက်နှာချင်းဆိုင်က ကမ်းခြေနဲ့
ပင်လယ်အလှတွေကို အပြည့်အဝ ခံစားလို့ရတယ်။ လေကောင်းလေသန့် တဖြူးဖြူးနဲ့ သစ်ကြီးဝါးကြီး
အရိပ်အောက်မှာ သိပ်အေးချမ်းတယ်။ အိမ်ဘေးနားကနေ ကွေ့ပါတ်စီးသွားတဲ့ တောင်ကျချောင်းလေးက
ရေတံခွန်အသေးစားလေးလို စမ်းရေ စီးသံ တသွင်သွင်နဲ့ ပကတိ ငြိမ်းချမ်းလွန်းလှတယ်။ ခြံထဲမှာ
တောပန်းလေးတွေက အရောင်စုံ အနီ အဝါ အဖြူ ပန်းနာမည်တွေတော့ သေသေချာချာ မသိပါဘူး မြန်မာပြည်မှာ
မြင်နေကျ ပန်းလေးတွေ များပါတယ်။ တောရိပ်တောင်ရိပ်ကိုရောက်နေတာဆိုတော့
စိတ်ပူမိတာက ခြင်ဒုက္ခ။ အိမ်ရှင်ကို ခြင်ရှိလားမေးတော့ မရှိပါဘူးတဲ့ ဝရံတာ တံခါးတွေ
ပြတင်းပေါက်တွေ စိတ်ကြိုက်ဖွင့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ စိတ်အေးရတယ်။
အခန်းမှာ ခဏနား ရေချိုးပြီးတော့ တောင်စောင်းလေးအတိုင်းဆင်းပြီး ကမ်းခြေတလျှောက် လမ်းလျှောက်ထွက်ဖြစ်တယ်။
ညနေစောင်းဆိုပေမယ့် လမ်းမှာ ဖြတ်သွားဖြတ်လာ ကားတချို့ကလွဲလို့ လူသွားလူလာ နည်းတယ်။
ကမ်းခြေတလျှောက် အေးအေးဆေးဆေးလမ်းလျှောက်ရင်း ဓါတ်ပုံတွေစရိုက်ကြတယ် လမ်းလျှောက်ရင်း
ညစာစားဖို့ စားသောက်ဆိုင် ရှာပုံတော်ဖွင့်ရတယ်။
ဟိုတယ်နားကနေ တော်တော်လှမ်းလှမ်းရောက်တဲ့ အထိ စားသောက်ဆိုင် မတွေ့ရပဲ အရက်ရောင်းတဲ့
ဘားတွေပဲတွေ့တော့ ညစာအတွက်အဆင်ပြေအောင် စီစဉ်ရပြန်တယ်။
ကုန်စုံဆိုင်လို စတိုးဆိုင် ပိစိသေးသေးလေးတွေ နေရာတိုင်းမှာရှိတယ် အစားအသောက်ကတော့
အတော်ရှားပါးပုံရတယ်။ ကြက်ဥ ပေါင်မုန့် ဒိန်ခဲ ထောပါတ် နွားနို့ အချိုရည်ဘူးတွေ ဝယ်ပြီး
ညစာနဲ့ နောက်နေ့ မနက်စာအတွက် ရိက္ခာစဖြည့်ရတယ်။
ကြီးသလောက် လူသူပြတ်လွန်းတော့ မိုးချုပ်တဲ့ အထိ အပြင်မှာ မနေရဲဘူး နေမဝင်ခင် တည်းခိုအိမ်ကို
ပြန်တက်ရတယ်။ အိမ်ရှင်ကိုရှာပြီး နောက်နေ့တွေအတွက် ခရီးစဉ်စဆွဲရတယ်။ လည်ဖို့ပါတ်ဖို့
သွားသင့်တဲ့နေရာတွေ တိုင်ပင်ရတယ်။ ကားငှားရတယ်။ အခြားကျွန်းတွေဆီလည်ဖို့ စုံစမ်းရတယ်။
ကျွန်မတို့ရောက်နေတဲ့ ရက်ပိုင်းမှာ မိုးတွေရွာနေတော့ အခြားကျွန်းကို ခပ်ပြပြတောင် မှိန်မှိန်လေးပဲ
မြင်ရတယ်။ မိုးရိပ်ဆင်နေတော့ အတူသွားတဲ့ သူငယ်ချင်းက စပိဘုတ်မစီးရဲဘူးဆိုတာနဲ့ ရာသီဥတုကိုကြည့်ပြီးမှ
အခြားကျွန်းတွေ လည်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ရတယ်။ သိပ်လှတယ်လို့
နာမည်ကြီးတဲ့ ပရာလေး ကျွန်းကိုသွားမယ်ဆိုရင် မော်တော်ဘုတ် နေ့လည်စာအပါအဝင် ခရီးစဉ်
တခုလုံးအတွက် တစ်ယောက်ကို ယူရို နှစ်ရာ ကျမယ်လို့ဆိုတယ်။
ကားသမားရောက်လာတယ် အိမ်ရှင် လေယာဉ်မှူးကလဲ စောစောစီးစီး ရောက်လာတယ်။ မြေပုံရှိရင် ယူခဲ့
ဘောပင်လေးပါယူခဲ့ဆိုတော့ မြေပုံကိုင်ပြီး ဘောပင်ရှာရတယ်။ ကံဆိုးချင်တော့ ဘောပင်မပါသွားဘူး
အလှပြင်ပစ္စည်းတွေထဲမှာ ထိုးထိုးထောင်ထောင်ထွက်နေတဲ့ မျက်ခုံးမွှေးဆွဲခဲတံတွေ့တော့ ဝမ်းသာအားရ
မြေပုံပေါ်မှာ အမှတ်အသားတွေ လုပ်ပေးတယ်။ ကျွန်မတို့ ရှိနေတဲ့ နေရာ လည်ရမယ့်နေရာတွေ ပြတယ်။
မဖြစ်မနေ အရောက်သွားရမယ့် လှတဲ့ နေရာတွေကို ကြက်ခြေခတ်ပေးလိုက်တယ်။ မြေပုံကလဲ ရှင်းလို့လင်းလို့
လမ်းကတော့ မှားစရာမရှိ ကျွန်းကြီးကို ပါတ်ပြီး ဖောက်ထားတဲ့ လမ်းတစ်လမ်းပဲ ရှိတာ ဘယ်လိုသွားသွား
မှားစရာမရှိ အန္တရာယ် မရှိတဲ့ ကျွန်း။ မြေပုံနှစ်ချပ်ကိုင်ပြီး ကျွန်မတို့ စစ်ဆင်ရေးထွက်ဖို့
ရယ်ဒီဖြစ်ချိန်က မနက် ကိုးနာရီ မထိုးသေးဘူး။ ကားငှားခက အတော့်ကို ဈေးကြီးပါတယ်။
လှတဲ့ ကမ်းခြေတွေ့တိုင်း ကားရပ်ပြီး ဓါတ်ပုံဆင်းရိုက်။ တောထဲမှာ ဖောက်ထားတဲ့ ကားလမ်းတလျောက်
ဟိုသည်ငေးမောပြီး ကျွန်းကြီး မာဟီကို စပါတ်ကြတယ်။ နေ့လည်စာစားဖို့ အဓိက သွားရမယ့်နေရာက
မြို့တော် ဗစ်တိုးရီးယားလို့ သတ်မှတ်ထားလိုက်တယ်။ မနက် အိပ်ယာနိုးနိုးချင်း ရာသီဥတုကိုကြည့်တုန်းက
နေ့လည် ၁၁ နာရီမှာ မိုးစရွာမယ်လို့ပြောထားတယ်။ သူပြောထားတဲ့အတိုင်း ၁၁ နာရီမှာ မိုးစရွာတယ်။
ရွာတာမှ တနေ့လုံး တစိမ့်စိမ့်နဲ့ရွာတာ။
စတိုးဆိုင်လေးတွေမှာ မုန့်ဝယ် အအေးဝယ် စားသောက်ပြီး အေးအေးဆေးဆေး လည်ကြတယ်။ တောအုပ်တနေရာမှာ
အုန်းသီးတွေတွေ့တော့ အုန်းရည် သောက်ကြသေးတယ်။ မိုးတစိမ့်စိမ့်နဲ့ တောလမ်းတလျှောက် သွားကြရင်း
ကျွန်းရဲ့ အရှေ့နဲ့ အနောက်ကို ဖြတ်ဖောက်ထားတဲ့ လမ်းအတိုင်း မြို့တော် ဗစ်တိုးရီးယားကို
ချီတက်ကြတယ်။ ကားသမားက သူ့ဟာသူမောင်းတယ်ဆိုပေမယ့် ကျွန်မတို့က မြေပုံထောက် ဆရာလုပ်တာကတော့
အမျိုးသမီးများရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း အစဉ်အလာမပျက်စေရအောင်ပါ။
ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ကမ်းခြေတွေက လှသထက်လှလာသလို ရှုမဆုံးတဲ့ အလှတွေကိုပဲ တွေ့နေရတယ်။
ကျွန်းကြီးရဲ့ အရှေ့နဲ့ အနောက်ကို ဖြတ်ဖောက်ထားတဲ့ ဖြတ်လမ်းက တောတွေ တောင်တွေ ဖြတ်ကျော်ရတဲ့
လမ်း။ တောကြီးမျက်မည်းဆိုပေသိ လမ်းက သာတော့ အဆင်ပြေတယ်။ တောကြီးတခုလုံး အမှိုက်သရိုက်မရှိအောင်
စည်ပင်တွေက အလုပ်လုပ်ကြတယ်။ တောထဲတောင်ထဲမှာလည်း အမှိုက်ပုံးကြီးတွေ လေးပုံးတွဲရက် နေရာတိုင်းမှာ
ဒေသခံ ဝန်ထမ်းတွေ တွေ့ရတယ် ခရီးသွားတွေကို ကူညီကြတယ်။ တောင်ထိပ်ဖျားဆီကနေ ကျွန်မတို့သွားမယ့်
ဗစ်တိုးရီးယားမြို့လေးကို ဆီးတွေ့ရတော့ ပျော်သွားတယ်။ မြို့လေးကို အဆောက်အဦတွေ အစုလိုက်အ
အပြုံလိုက် ပုံစံနဲ့တွေ့ရတော့ ထူးဆန်းနေပြန်တယ်။
မြို့ထဲကို မရောက်ခင်မှာ အမျိုးသားဥယျာဉ်တွေ့တော့
ဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ဝင်ကြေးက တစ်ယောက်ကို ဆယ်ဒေါ်လာပေးရတယ်။ သစ်ကြီးဝါးကြီးတွေနဲ့ တောကြီးမဟာပါပဲ။
ထူးထူးခြားခြားတွေ့ရတာက လိပ်အကြီးကြီးတွေ ဧရာမလိပ်ကြီးတွေကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ လိပ်အနားကို
သွားချင်ရင်တော့ ဆေးရှဲလ်ငွေ တစ်ယောက်ကို ငါးဆယ်ပေးရတယ် ဒါက လိပ်စာကျွေးဖို့ပေးရတဲ့
သဘောလို့ထင်တယ် ဘောက်ချာမရဘူး။ ရူပီးငါးဆယ်ပေးတော့ ငှက်ပျောရွက် နှစ်ရွက်စီရတယ်။ ငှက်ပျောရွက်ကိုအရင်းကကိုင်ပြီးကျွေးတော့
လိပ်တွေက အားရပါးရ စားကြတယ်။ အမျိုးသား
ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာ ချောကလက်လုပ်တဲ့ ကိုကိုးပင်ကို တွေ့ရတယ်။ ကိုကိုးပင်က ထွက်တဲ့ အသီးက
သူတို့နိုင်ငံရဲ့ National fruit လို့ပြောကြတယ်။ အသီးက အဖိုနဲ့ အမ နှစ်မျိုးရှိပြီး
အမကသူတို့ နိုင်ငံရဲ့ အထိမ်းအမှတ်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်။ အသီးရဲ့ ပုံစံက အမျိုးသမီးရဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းကိုယ်
အဂါင်္နဲ့တူတယ်။ အဲဒီအသီးကို သော့ချိတ်တွေ လုပ်ပြီး ရောင်းတာကိုထပ်တွေ့ရတယ်။ ကိုကိုးသီးရဲ့
ပုံစံက အုန်းသီးလို ထန်းသီးလို ဒါပေမယ့် အလေးချိန်က တစ်လုံးကို ဆယ့်ငါးကီလိုအထက်မှာ
ကားလမ်းကျဉ်းကျဉ်းလေးတွေ ကားတွေ လူတွေကို ဘွားကနဲတွေ့လိုက်ရတယ်။ မြို့သေးသေးလေးမှာ
ကားသေးသေးလေးတွေပဲ စီးကြတာ သတိထားမိတယ်။ ကျွန်းတကျွန်းလုံးမှာ ကားလမ်းက တစ်လမ်းမောင်း
ဟိုဘက်ဒီဘက် ကားနှစ်စီးစာပဲ ရှိတော့ ကားမှတ်တိုင်တွေကို ကတ္တရာလမ်းမပေါ်မှာ Bus Stop
လို့ စာရေးပြီး အမှတ်အသားလုပ်ထားကြတယ်။ ကျောင်းကားရော
ဘတ်စ်ကားတွေပါ အပြာရောင်ကားကြီးတွေ ချောင်ချောင်ချိချိ သက်တောင့်သက်သာရှိတာတွေ့ရတယ်။
မြို့ထဲမှာ လူသွားလူလာမပြတ် စည်ကားပေမယ့် လူသိပ်မရှုပ်လှဘူး။ နေ့လည်တည်းက ရွာနေတဲ့မိုးက
တစိမ့်စိမ့်။ ရာသီဥတု အခြေအနေကြည့်ခဲ့ပေမယ့် ထီးမယူလာမိတော့ ဂျာကင်ဝတ် ဦးထုတ်ဆောင်းပြီး
မိုးရေထဲမှာ မြို့လေးထဲ လမ်းလျှောက်ပြီး လည်ကြတယ်။ ကမ်းခြေမှာ နေပူရင်ဆောင်းဖို့ ယူလာတဲ့
ဦးထုပ် ဖားဖားကြီးတွေက မိုးရွာတော့လည်း အဆင်ပြေသွားတယ်။
သိပ်မပါတ်လိုက်ရဘူး။ စားသောက်ဆိုင်ကတော့ အတော်ရှာလိုက်ရတယ်။ မြို့လည်ခေါင် နာရီစင်ဘေးနားမှာ
တစ်ဆိုင် နာရီစင်နဲ့ မလှမ်းမကမ်းက ဈေးလေးနားမှာ တစ်ဆိုင် နှစ်ဆိုင်တွေ့ရတယ်။ နေ့လည်စာဆိုပေမယ့်
မိုးရွာထဲမှာ ဟိုလည် သည်လည်နဲ့ နောက်ဆုံးမှ ဆိုင်ရှာတွေ့တော့ ထမင်းစားရတဲ့ အချိန်က
နေ့လည် သုံးနာရီခွဲ။ စားသောက်ဆိုင်မှာ နိုင်ငံခြားသားတွေပဲ တွေ့ရတယ်။ ကျွန်မတို့တွေ
ငါးနဲ့ အားလူးချောင်းကြော်မှာစားတယ်။ ကျန်တဲ့ မီနူးတွေက ဥရောပစာ မီနူးတွေ။ ညစာစားပြီး
မိုးရေထဲမှာ မြို့ကို ခဏလည် ဈေးပိစိလေးကို လျှောက်ကြည့် မိုးမချုပ်ခင် ကမ်းနားလမ်းဘက်ကနေ
တည်းခိုတဲ့ နေရာကို ပြန်ကြတယ်။ လမ်းမီးတိုင်တွေ တွေ့မိတယ်ဆိုပေမယ့် မြို့လည်ခေါင်ကလွဲလို့
ကျွန်းက လူပြတ်လွန်းတာမို့ ခပ်စောစော အိပ်တန်းပြန်တက်ရတယ်။ လမ်းဘေးမှာ သစ်သီးဆိုင်လေးနဲ့
ငါးလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်တွေ ရောင်းနေတဲ့ ဒေသခံ တချို့ကိုတွေ့ရတယ်။ သူတို့ဆီမှာလည်း ဈေးရောင်းသူတွေက
နေရာပြန်ရောက်တော့ မိုးမိထားတဲ့ဒဏ်နဲ့ အညောင်းမိတဲ့ဒဏ်ပေါင်းပြီး ဧည့်ခန်းက ဆိုဖာပေါ်မှာ
ချက်ချင်း အိပ်ပျော်သွားတယ်။ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်လုံး ဗိုက်ဆာလို့ တရေးနိုးလာတော့ ညဆယ်နာရီ။
သွားဖို့ လည်ဖို့ အစီအစဉ်ထပ်ဆွဲပြီး ချန်နယ် သုံးလေးခုလောက်ပဲရှိတဲ့ တီဗီကို ထိုင်ကြည့်ကြတယ်။
ရာသီဥတုကို ထပ်ကြည့်တယ် မိုးရွာမယ်ပြောပြန်တယ် ရာသီဥတု မကောင်းဘူးထင်ရတာမို့ အခြားကျွန်းကို
မော်တော်ဘုတ်နဲ့ သွားမယ့် အစီအစဉ်ကို ဖျက်လိုက်ရတယ်။ တစိမ့်စိမ့်ရွာနေတဲ့ မိုးကို ကြုံဖူးလိုက်တော့
မော်တော်ဘုတ်နဲ့ ကျွန်းတွေ ကူးရမှာ လန့်နေမိတယ်။ ဒီတော့ မနက်စာစားပြီးတာနဲ့ မြေပုံတချပ်ရှေ့ချ
မနေ့က မရောက်ခဲ့တဲ့ နေရာတွေ အေးအေးဆေးဆေး ထပ်လည်မယ်ဆိုပြီး အစီအစဉ် ကတိုက်ကရိုက်ပြောင်း
ကားထပ်ငှားပြီး မာဟီကျွန်းတော်ကို နောက်တပါတ်ထပ်ပါတ်ကြတယ်။
ကျွန်မတို့ ပထမနေ့က ကျော်သွားတဲ့ နေရာတွေ သတိမထားမိတဲ့ နေရာတွေ သိပ်လှတဲ့ ကျွန်းတွေ
ကမ်းခြေတွေ အများကြီးကို ထပ်တွေ့ရတယ်။ မာဟီကျွန်းမှာ
နာမည်ကျော်တဲ့ တာကာမာကာ ကမ်းခြေမှာ အေးအေးဆေးဆေး နားနားနေနေ ဓါတ်ပုံရိုက် ကျောက်ဆောင်တွေကြားမှာ
ရေဆော့ လိပ်တွေထပ်တွေ့တော့ ထပ်ပြီး စပ်စုကြတယ်။ တာကာမာကာကိုရောက်တော့ ကမ်းခြေအလှကိုအငေးလွန်
ကားသမားကိုဆရာလုပ်ပြီး ငှားလာတဲ့ကားက သဲထဲနစ်သွားတယ်။ ချက်ချင်းဆိုသလို အမျိုးသမီးရဲအရာရှိတစ်ယောက်နဲ့
ဒေသခံတွေ ရောက်လာပြီး ကူညီကြတယ်။ ဒီတော့မှ ကမ်းခြေတိုင်းမှာ ရဲအရာရှိတွေ ရှိနေတာကို
သတိထားမိတယ်။ ရဲအရာရှိတွေက မနက် ကိုးနာရီကနေ ညနေ ငါးနာရီခွဲ အလုပ်ချိန်အတွင်းမှာ လာသမျှ
ဧည့်သည်တွေကို ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးကြတယ်။ ဒေသခံတွေက ရိုးသားကြတယ် စိတ်ရင်းစေတနာနဲ့
ကူညီကြတယ် ကူစရာရှိတာကူပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်းလှည့်ပြေးတော့တာ ဒီတော့ ရဲအရာရှိမကို အကူအညီတောင်းပြီး
ထွက်တော့ နေ့လည်စာစားဖို့ ကျွန်မတို့နဲ့ အဆင်ပြေမယ့် စားသောက်ဆိုင်ဆိုတာကို မြေပုံပေါ်မှာ
မူးနောက်နေအောင်ရှာရတယ်။ မြို့တော် ဗစ်တိုးရီးယားကလွဲရင် အခြားနေရာတွေမှာ စားသောက်ဆိုင်ရှားပါးတယ်။
ကျွန်မတို့က ရှားပါးတဲ့နေရာမှာ ကြေးကများသေးတယ် ။ မြေပုံပေါ်မှာ စားသောက်ဆိုင်လို့ ပြထားပြီဆိုရင်
တိုးရစ်စ်တွေအတွက် စားစရာတခုခုတော့ ရနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ကြတာ။ ဒါနဲ့ အေဒင်ကျွန်းကို
ရောက်ခဲ့ကြတယ်။ အမှန်ကတော့ စားသောက်ဆိုင်တွေ့လို့ ဆင်းကြတာ။
ကမ်းခြေမှာ ပင်လယ်ကို မျက်နှာမူထားတာ။ ကံကောင်းချင်တော့ ကမ်းခြေနဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာ
ကျွန်း သုံးကျွန်းတွေ့ရတယ်။ စားရင်းသောက်ရင်း မြင်နေရတဲ့ ကျွန်းတွေဆီ သွားလို့ရမရ စပ်စုတော့
ရတယ်တဲ့။ မလှမ်းမကမ်းမှာ မြင်နေရတဲ့ ကျွန်းတွေဆီကို တချို့ ဧည့်သည်တွေက မော်တော်ဘုတ်သေးသေးလေးနဲ့
ကူးသွားတာတွေ့ရတယ်။ တချို့ကျတော့ ရေထဲမှာ လမ်းလျှောက်သွားနေကြတယ်။ ရေက သိပ်မနက်ဘူး
ကြည်လင်စိမ်းမြနေတော့ ရေအောက်ထဲကို အတိုင်းသားမြင်နေရတယ်။ ရေအနက်က ကျွန်မတို့ဒူးခေါင်းအထက်နားကနေ
ပေါင်ရင်းလောက်ပဲရှိမယ် ခါးနားဆီတောင် မရောက်တော့ လမ်းလျှောက်ကြမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
နှစ်ရာရီ နေက ကျဲကျဲတောက်ပူတယ်။ ဆေးရှဲလ်ဟာ ကမ်းခြေတွေ သိပ်လှသလို နေရောင်ခြည်မှာယူဗီင်္ွတွေ
သိပ်များတယ်လို့ နာမည်ကြီးတယ်။ အသားအရေကို နေမလောင်အောင် ယူဗွီကာကွယ်တဲ့ ခရင်တွေ လိမ်းလာပြီးသားဆိုတော့
ဦးထုပ်ကြီးတွေဆောင်း မျက်မှန်တပ် အသားအရေကို တတ်နိုင်သလောက် နေမလောင်အောင် အကာအကွယ်တွေလုပ်ပြီး
လှေသမားက လမ်းလျှောက်မယ်ဆိုရင် သဲပြင်တွေကိုမြင်နေရတဲ့ လမ်းကြောင်းဖြူဖြူပိုင်းက ရေတိမ်တယ်
ရေမှော်ပင်တွေရှိတဲ့ လမ်းကြောင်းစိမ်းစိမ်းက နည်းနည်းနက်မယ် ဒီတော့ ဖြူတဲ့ လမ်းကြောင်းအတိုင်းပါတ်ပြီး
ကျွန်းကို သွားပါလို့ လမ်းပြတယ်။ သူ့စကားနားထောင်ပြီး မြင်နေရတဲ့ ကျွန်းကို အတည့် မကူးပဲ
ချွေးနည်းနည်းစို့နေပြီ။ ကမ်းခြေကနေ ကျွန်းပေါ်ကသစ်ပင်ရိပ်တွေဆီကို
ပြေးသွားမိတယ်။ ကျွန်းပေါ်ကိုတက်တဲ့ လှေကားထစ်နားကို ရောက်တော့ ကျွန်းက လုံခြုံရေးတစ်ယောက်က
ကျွန်မတို့ကို လာတားတယ်။ ဒီနေရာက တားမြစ်နေရာပါ ဒီအပေါ်ကို ဆက်တက်လို့မရပါဘူး အပေါ်မှာ
ရှိုးရိုက်နေပါတယ်ဆိုပြီး ကင်မရာတွေကို လက်ညှိုးထိုးပြတယ်။
ကင်မရာတွေ အပြည့်တပ်ထားတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ ပြီးတော့ အပေါ်နားဆီမှာ စကားပြောနေသံတွေပါကြားရတယ်။
ဒီတော့ အိုကေလို့ပြောပြီး သွားလို့ရတဲ့ နေရာတွေကနေ ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ကြပြန်တယ်။ ကျွန်မတို့ရောက်နေတဲ့
ကျွန်းပိစိလေးကို ရုရှားတွေက အပိုင်ဝယ်ထားတာလို့ သိရတယ်။ သူတို့တွေ ရှိုးတစ်ခုရိုက်နေတယ်ဆိုတော့
ဘာရှိုးလဲလို့ စပ်စုမိပြန်တယ်။ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းက သေသေချာချာ ရှင်းပြတော့ ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့
အံ့သြရတယ်။ မေးမိတဲ့ ပါးစပ်ကိုလဲ မနည်းပြန်ပိတ်ရတယ်။ သူတို့က ပွင့်လင်းလွန်းတာကိုး။
ကျွန်မတို့လာခဲ့တဲ့ မာဟီကျွန်းကြီးရဲ့ အလှအပကို သေသေချာချာ တွေ့ခွင့်ရတော့တယ်။
မြင်နေရတဲ့ ကျွန်းကြီးက စိမ်းစိမ်းစိုစို တောင်ကမ်းပါးယံတွေပေါ်က အိမ်တွေ ဟိုတယ်တွေ
ကမ်းခြေဖြူဖြူတွေ မျက်စိတဆုံး ရှုမဆုံးအောင်ကို လှပါတယ်။
မာဟီကျွန်းကြီးဆီကို လမ်းလျှောက်ပြီး ပြန်ကူးလာခဲ့ကြတယ်။ အပြန်မှာတော့ ဒီရေတက်လို့လား
စိတ်ထင်လို့လားမသိ အသွားထက်ကို ရေက ပိုနက်သလို ခံစားရတယ်။ စားသောက်ဆိုင်က လူတွေက ဆိုင်နားမှာ
ရေတံခွန်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဆိုတော့ မလှမ်းမကမ်းက ရေတံခွန်ဆီကို ဆက်ပြီး ချီတက်ကြတယ်။ ကားဝင်လို့ရတဲ့
နေရာအထိဝင်ပြီး ဒေသခံ လမ်းပြတစ်ယောက်က ရေတံခွန်အရောက်ပို့ပေးတယ်။
နေဝင်ပြီး မှောင်သွားရင် ကျွန်းပေါ်မှာ ဒုက္ခရောက်မှာစိုးတော့ ရောက်ရာအရပ်ကနေ စောစောပြန်လှည့်ကြတယ်။အပြန်လမ်းမှာ
ဟိုတယ်နားနီးတဲ့ ကမ်းခြေတစ်ခုမှာ တိုးရစ်စ်တွေ အများကြီးရေစိမ်နေတာတွေ့တော့ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်
ရေချိုနဲ့ မခြားလှဘူး။ ကြည်လင်စိမ်းမြနေတော့ အောက်ခြေက သဲပြင်ကို အတိုင်းသားတွေ့နေရတယ်။
လှိုင်းလေ ကင်းစင်နေတော့ ညနေစောင်းလေးမှာ ရေကူးသူ ရေစိမ်သူတွေနဲ့ ကမ်းခြေက စည်ကားနေတယ်။
အဝတ်လဲခန်းသီးသန့် မရှိပေမယ့် အားလုံးက ပေါ့ပေ့ါပါးပါး ကမ်းခြေက သစ်ပင်တွေ ခြုံတွေကြားမှာ
အဝတ်လဲကြတယ်။ ရေစိမ်နေတုန်း နေမစောင်းခင်မှာ မိုးရိပ်ဆင်လာတော့ ရေထဲက တက်ပြီး ဟိုတယ်ကို
တိုးရစ်တွေ အုပ်စုလိုက် အေးအေးဆေးဆေး ရေကူး ရေစိမ်လုပ်နေကြတော့ ကမ်းခြေတိုင်းက လူမပြတ်ဘူး။
အနည်းဆုံး ရေကူးနေတဲ့သူ သုံးလေးယောက်တော့ တွေ့ရတယ်။
မပြန်ခင်ညနေစောင်းလေးမှာ မိုးဖွဲဖွဲလေးနဲ့ ကျွန်မတို့ကို နှုတ်ဆက်ရှာတယ်။ နောက်နေ့မနက်
လေယာဉ်စီးရမှာမို့ ဟိုတယ်မှာ ပစ္စည်းတွေ သိမ်းဆည်းထုတ်ပိုးရတော့တယ်။
မနက်စောစောထပြီး လေယာဉ်ကွင်းဆင်းဖို့ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့ အထိ နေမထွက်သေးဘူး။ ရောင်နီသမ်းလာတော့မှ
ကျွန်မတို့ ဟိုတယ်က ထွက်လာကြတယ်။ လမ်းမှာတော့ နေကောင်းကောင်း မထွက်ခင်မှာပဲ ဘတ်စ်ကားစောင့်နေကြတဲ့သူတွေကို
သတိထားမိတဲ့ အချက်က ဆေးလ်ရှဲကျွန်းမှာ ဈေးရောင်းနေသူတွေအားလုံးဟာ အမျိုးသားတွေ စတိုးဆိုင်နဲ့
လမ်းဘေးကငါးစိမ်းဆိုင်တွေမှာ အမျိုးသားတွေပဲ ဈေးရောင်းတယ်။ ဘတ်စ်ကားဂိတ်တွေနဲ့ ကားတွေပေါ်မှာ
လမ်းတွေပေါ်မှာကျတော့ အမျိုးသမီးတွေပဲ တွေ့ရတယ်။ အမျိုးသားတွေကို လမ်းပေါ်မှာ မတွေ့ရသလောက်ရှားပါးတယ်။
မနက်စောစောစီးစီးမှာ လေဆိပ်သေးသေးလေးက ခရီးသွားတွေနဲ့ စည်ကားနေတာတွေ့ရတယ်။ ဂျူတီဖရီးဆိုင်သေးသေးလေးမှာ
အလှကုန်တွေ ရေမွှေးတွေကို လိုက်စပ်စု ဈေးနှုန်းတွေကို ဟိုနိုင်ငံနဲ့ သည်နိုင်ငံ ဘယ်ကများတယ်
နည်းတယ်ဝေဖန်ကြပြီး ဆေးရှဲလ်ကျွန်းလေးကို လက်ပြခဲ့ကြတယ်။
မျက်စိထဲမှာ ရေတွေ ပင်လယ်ကမ်းခြေတွေနဲ့ တောရိပ်တောင်ရိပ်ကို တစိမ့်စိမ့်ပြန်မြင်နေတုန်း။